Yoma Group Pre-Booking – COVIDPass
Connect with your Issuer
Pun Hlaing Connection
Yoma Group Pre-Booking
This Covid-19 Vaccination Pre-Booking is only for Yoma Group Staff, Contractors of Yoma Group and Family Members.
The Vaccine Information (Sinopharm), FAQ sheet, Fit or Not Fit for the vaccine will be decided after you have registered and will communicate back to you through your entity HR.
(ကာကွယ်ဆေးအချက်အလက် (Sinopharm)။ စာရင်းပေးသွင်းပြီးမှသာ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အတွက်သင့်တော်မှုရှိ၊ မရှိကိုဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး သင့်အားသက်ဆိုင်ရာ HR မှတဆင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါမည်။).
Are youaYoma Employee or Others? သင်သည် ရိုးမဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် အခြား? * Yoma EmployeeOthers
Company entity (ရိုးမဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အောက်ပါ အချက်အလက်များမှအဖွဲ့အစည်းကိုရွေးချယ်ပါ) * ChooseAuntie Annes (Blue Ridge Company Limited)Awei Metta (Pun Hlaing Lodge Hotel Management Limited)Awei Pila (Mokan International Company Limited)Balloons Over Bagan (Shwe Lay Ta Gun Travels & Tours Company Limited)Burma Boating (Burma Boating Company Limited)Delta CapitalDucati (SGG Motor Services Limited)Dulwich ()FMI City (F. M. I Garden Development Limited)FMI DecauxHead Office (Corporate) (First Myanmar Investment Public Company Limited)Head Office (Corporate) (Serge Pun & Associates (Myanmar) Limited)Head Office (Corporate) (Yoma Nominee Limited)Head Office (Corporate) (Yoma Strategic Holdings Ltd.)Head Office (Yoma Agri) (Yoma Agricultural & Logistics Holding Pte. Ltd.)Head Office (Yoma Agri) (Yoma Agriculture Company Limited)Head Office (Yoma Agri) (Zuari Yoma Agri Solutions Limited)Head Office (Yoma Motors) (Successful Goal Trading Company Limited)Hotel Suggati (SM Mawlamyaing Hotel Limited)JJ PUN (JJ PUN Trading Ltd)Keinnara Hpaan (Hpa An Traditional Lodge Limited)Keinnara Loikaw (Keinara Loikaw Company Limited)KFC (Summit Brands Restaurant Group Company Limited)KOSPA/METRO (KOSPA Limited)Little Sheep (Altai Myanmar Company Limited)Maw Tin (Coffee) (Myanmar Agri-Tech Limited)Memories (Asia Holidays Travels & Tours Company Limited)Memories (Chindwin Investments Limited)Memories (Memories Group Limited.)Memories (Memories Myanmar F&B Management Co.,Ltd)Metro (Metro Wholesale Myanmar Ltd)Mitsubishi Motors (MM Cars Myanmar Limited)New Holland (Convenience Prosperity Company Limited)Pun Akery (F M I Flotilla Company Limited)Pun Hlaing Estate (Hlaing River Golf And Country Club Company Limited)Pun Hlaing Hospital (Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Limited)PUN PLUS Projects LimitedSeagram ()Serge Pun & Associates Marketing LimitedSPA Design & Project Services LimitedSPA Project Management Pte. Ltd.Star City (Thanlyin Estate Development Limited)Volkswagen (Yoma German Motors Limited)Wave Money ()YKKO (YKKO Group of Companies)Yoma Bank ()Yoma Central (Meeyahta Development Limited)Yoma Development Group LimitedYoma Fleet (Yoma Fleet Limited)Yoma Micro Power (Yoma Micro Power Myanmar Limited)Yoma Motors (Myanmar Motors Pte. Ltd.)Others
Employee ID ဝန်ထမ်း မှတ်ပုံတင်အမှတ် *
Please Choose the Other Entity below အောက်ပါ အချက်အလက်များမှ သင်၏အဖွဲ့အစည်းကိုရွေးချယ်ပါ။ * ChooseColourful Nature Co; LtdEfficient Engeering Group Co.,LtdGlobal Hi Tech Co., LtdInvestcorp Myanmar Co; LtdKo Khin Aung & Group Co., LtdMuse And Wittiness Design & Engineering Co., LtdMyo & Myint Brothers Co., LtdPerfect Power Co; LtdSan Taw Eain Construction Co., LtdShine LaundryVTL Aluminium and Glass Co; LtdZaw Lin Lay Co., Ltd
Personal Information ကိုယ်ရေးအချက်အလက်
Please only use English language in your answers. ကျေးဇူးပြု၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသာသုံး အသုံးပြု၍ဖြေဆိုပါ။
Full name အမည်အပြည့်အစုံ *
Nationality နိုင်ငံသားအမျိုးအစားကိုဖြည့်ပေးပါ။ ဉပမာ - မြန်မာ *
NRC number or Passport နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/နိုင်ငံကူးမှတ်ပုံတင်အမှတ်ကိုဖော်ပြပေးပါ *
For the NRC number, please use the following standard 12/MaGaDa(N)123456 နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် ရေးသားရာတွင် ဖော်ပြပါပုံစံအတိုင်းရေးသွင်းပါ 12/MaGaDa(N)123456
Birth Date မွေးနေ့၊ မွေးလ၊ မွေးနှစ် ကိုဖော်ပြပေးပါ။ DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / MM123456789101112 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
Gender ကျား/မ ရွေးပေးပါ * MaleFemale
Phone Number ဖုန်းနံပါတ် *
Use the format of e.g. 0791234567
Email အီးမေးလ် *
Father's Name ဖခင်နာမည်အပြည့်အစုံကိုရေးပေးပါ *
Permanent Address အမြဲတမ်းနေသော နေရပ်လိပ်စာ *
Township မြို့နယ် * Ahlone	အလုံAmarapura	အမရပူရAnn	အမ်းAunglan	အောင်လံAungmyaythazan	အောင်မြေသာစံAyadaw	အရာတော်Bago	ပဲခူးBahan	ဗဟန်းBanmauk	ဗန်းမောက်Bawlakhe	ဘောလခဲBhamo	ဗန်းမော်Bilin	ဘီးလင်းBogale	ဘိုကလေးBokpyin	ဘုတ်ပြင်းBotahtaung	ဗိုလ်တထောင်Budalin	ဘုတလင်Buthidaung	ဘူးသီးတောင်Chanayethazan	ချမ်းအေးသာစံChanmyathazi	ချမ်းမြသာစည်Chauk	ချောက်Chaung-U	ချောင်းဦးChaungzon	ချောင်းဆုံChipwi	ချီဖွေCocokyun	ကိုကိုးကျွန်းDagon	ဒဂုံDagon Myothit (East)	ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)Dagon Myothit (North)	ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)Dagon Myothit (Seikkan)	ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)Dagon Myothit (South)	ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)Daik-U	ဒိုက်ဦးDala	ဒလDanubyu	ဓနုဖြူDawbon	ဒေါပုံDawei	ထားဝယ်Dedaye	ဒေးဒရဲDemoso	ဒီမောဆိုDet Khi Na Thi Ri	ဒက္ခိဏသီရိEinme	အိမ်မဲFalam	ဖလမ်းGangaw	ဂန့်ဂေါGwa	ဂွGyobingauk	ကြို့ပင်ကောက်Hakha	ဟားခါးHinthada	ဟင်္သာတHkamti	ခန္တီးHlaing	လှိုင်Hlaingbwe	လှိုင်းဘွဲ့Hlaingtharya	လှိုင်သာယာHlegu	လှည်းကူးHmawbi	မှော်ဘီHomalin	ဟုမ္မလင်းHopang	ဟိုပန်Hopong	ဟိုပုန်းHpa-An	ဘားအံHpakant	ဖားကန့်Hpapun	ဖာပွန်Hpasawng	ဖားဆောင်းHpruso	ဖရူဆိုHseni	သိန္နီHsihseng	ဆီဆိုင်Hsipaw	သီပေါHtantabin	ထန်းတပင်Htantabin	ထန်းတပင်Indaw	အင်းတော်Ingapu	အင်္ဂပူInjangyang	အင်ဂျန်းယန်Insein	အင်းစိန်Kalaw	ကလောKale	ကလေးKalewa	ကလေးဝKamaryut	ကမာရွတ်Kamma	ကံမKanbalu	ကန့်ဘလူKangyidaunt	ကန်ကြီးထောင့်Kani	ကနီKanpetlet	ကန်ပက်လက်Katha	ကသာKawa	ကဝKawhmu	ကော့မှူးKawkareik	ကော့ကရိတ်Kawlin	ကောလင်းKawthoung	ကော့သောင်းKayan	ခရမ်းKengtung	ကျိုင်းတုံKhaunglanhpu	ခေါင်လန်ဖူးKhin-U	ခင်ဦးKonkyan	ကုန်းကြမ်းKungyangon	ကွမ်းခြံကုန်းKunhing	ကွန်ဟိန်းKunlong	ကွမ်းလုံKutkai	ကွတ်ခိုင်Kyaiklat	ကျိုက်လတ်Kyaikmaraw	ကျိုက်မရောKyaikto	ကျိုက်ထိုKyainseikgyi	ကြာအင်းဆိပ်ကြီးKyangin	ကြံခင်းKyaukkyi	ကျောက်ကြီးKyaukme	ကျောက်မဲKyaukpadaung	ကျောက်ပန်းတောင်းKyaukpyu	ကျောက်ဖြူKyaukse	ကျောက်ဆည်Kyauktada	ကျောက်တံတားKyauktaga	ကျောက်တံခါးKyauktan	ကျောက်တန်းKyauktaw	ကျောက်တော်Kyaunggon	ကျောင်းကုန်းKyeemyindaing	ကြည့်မြင်တိုင်Kyethi	ကျေးသီးKyonpyaw	ကျုံပျော်Kyunhla	ကျွန်းလှKyunsu	ကျွန်းစုLabutta	လပွတ္တာLahe	လဟယ်Laihka	လဲချားLangkho	လင်းခေးLanmadaw	လမ်းမတော်Lashio	လားရှိုးLatha	လသာLaukkaing	လောက်ကိုင်Launglon	လောင်းလုံLawksawk	ရပ်စောက်Lay Shi	လေရှီးLemyethna	လေးမျက်နှာLetpadan	လက်ပံတန်းLewe	လယ်ဝေးLoikaw	လွိုင်ကော်Loilen	လွိုင်လင်Mabein	မဘိမ်းMachanbaw	မချမ်းဘောMadaya	မတ္တရာMagway	မကွေးMahaaungmyay	မဟာအောင်မြေMahlaing	မလှိုင်Mansi	မံစီManton	မန်တုံMatman	မက်မန်းMatupi	မတူပီMaubin	မအူပင်Maungdaw	မောင်တောMawkmai	မောက်မယ်Mawlaik	မော်လိုက်Mawlamyine	မော်လမြိုင်Mawlamyinegyun	မော်လမြိုင်ကျွန်းMayangone	မရမ်းကုန်းMeiktila	မိတ္ထီလာMese	မယ်စဲ့Minbu	မင်းဘူးMinbya	မင်းပြားMindat	မင်းတပ်Mindon	မင်းတုန်းMingaladon	မင်္ဂလာဒုံMingalartaungnyunt	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်Mingin	မင်းကင်းMinhla	မင်းလှMinhla	မင်းလှMogaung	မိုးကောင်းMogoke	မိုးကုတ်Mohnyin	မိုးညှင်းMomauk	မိုးမောက်Monghpyak	မိုင်းဖြတ်Monghsat	မိုင်းဆတ်Monghsu	မိုင်းရှူးMongkaing	မိုင်းကိုင်Mongkhet	မိုင်းခတ်Mongla	မိုင်းလားMongmao	မိုင်းမောMongmit	မိုးမိတ်Mongnai	မိုးနဲMongpan	မိုင်းပန်Mongping	မိုင်းပျဥ်းMongton	မိုင်းတုံMongyai	မိုင်းရယ်Mongyang	မိုင်းယန်းMongyawng	မိုင်းယောင်းMonyo	မိုးညိုMonywa	မုံရွာMrauk-U	မြောက်ဦးMudon	မုဒုံMunaung	မာန်အောင်Muse	မူဆယ်Myaing	မြိုင်Myanaung	မြန်အောင်Myaung	မြောင်Myaungmya	မြောင်းမြMyawaddy	မြဝတီMyebon	မြေပုံMyeik	မြိတ်Myingyan	မြင်းခြံMyinmu	မြင်းမူMyitkyina	မြစ်ကြီးနားMyittha	မြစ်သားMyothit	မြို့သစ်Namhkan	နမ့်ခမ်းNamhsan	နမ့်ဆန်Namtu	နမ္မတူNansang	နမ့်စန်Nanyun	နန်းယွန်းNarphan	နားဖန်းNatmauk	နတ်မောက်Natogyi	နွားထိုးကြီးNattalin	နတ်တလင်းNawnghkio	နောင်ချိုNawngmun	နောင်မွန်းNgape	ငဖဲNgapudaw	ငပုတောNgazun	ငါန်းဇွန်North Okkalapa	မြောက်ဥက္ကလာပNyaung-U	ညောင်ဦးNyaungdon	ညောင်တုန်းNyaunglebin	ညောင်လေးပင်Nyaungshwe	ညောင်ရွှေOke Ta Ra Thi Ri	ဥတ္တရသီရိOkpho	အုတ်ဖိုOktwin	အုတ်တွင်းPabedan	ပန်းဘဲတန်းPadaung	ပန်းတောင်းPakokku	ပခုက္ကူPalaw	ပုလောPale	ပုလဲPaletwa	ပလက်ဝPangsang	ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)Pangwaun	ပန်ဝိုင်Pantanaw	ပန်းတနော်Pathein	ပုသိမ်Patheingyi	ပုသိမ်ကြီးPauk	ပေါက်Paukkhaung	ပေါက်ခေါင်းPauktaw	ပေါက်တောPaung	ပေါင်Paungbyin	ဖောင်းပြင်Paungde	ပေါင်းတည်Pazundaung	ပုဇွန်တောင်Pekon	ဖယ်ခုံPhyu	ဖြူးPindaya	ပင်းတယPinlaung	ပင်လောင်းPinlebu	ပင်လည်ဘူးPoke Ba Thi Ri	ပုဗ္ဗသီရိPonnagyun	ပုဏ္ဏားကျွန်းPuta-O	ပူတာအိုPwintbyu	ပွင့်ဖြူPyapon	ဖျာပုံPyawbwe	ပျော်ဘွယ်Pyay	ပြည်Pyigyitagon	ပြည်ကြီးတံခွန်Pyinmana	ပျဉ်းမနားPyinoolwin	ပြင်ဦးလွင်Ramree	ရမ်းဗြဲRathedaung	ရသေ့တောင်Sagaing	စစ်ကိုင်းSalin	စလင်းSalingyi	ဆားလင်းကြီးSanchaung	စမ်းချောင်းSaw	ဆောSeikgyikanaungto	ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုSeikkan	ဆိပ်ကမ်းSeikphyu	ဆိပ်ဖြူShadaw	ရှားတောShwebo	ရွှေဘိုShwedaung	ရွှေတောင်Shwegu	ရွှေကူShwegyin	ရွှေကျင်Shwepyithar	ရွှေပြည်သာSidoktaya	စေတုတ္တရာSinbaungwe	ဆင်ပေါင်ဝဲSingu	စဥ့်ကူးSintgaing	စဉ့်ကိုင်Sittwe	စစ်တွေSouth Okkalapa	တောင်ဥက္ကလာပSumprabum	ဆွမ်ပရာဘွမ်Tabayin	ဒီပဲယင်းTachileik	တာချီလိတ်Tada-U	တံတားဦးTaikkyi	တိုက်ကြီးTamu	တမူးTamwe	တာမွေTanai	တနိုင်းTangyan	တန့်ယန်းTanintharyi	တနင်္သာရီTatkon	တပ်ကုန်းTaungdwingyi	တောင်တွင်းကြီးTaunggyi	တောင်ကြီးTaungoo	တောင်ငူTaungtha	တောင်သာTaze	တန့်ဆည်Tedim	တီးတိန်Thabaung	သာပေါင်းThabeikkyin	သပိတ်ကျင်းThaketa	သာကေတThanatpin	သနပ်ပင်Thanbyuzayat	သံဖြူဇရပ်Thandaunggyi	သံတောင်ကြီးThandwe	သံတွဲThanlyin	သန်လျင်Thantlang	ထန်တလန်Thaton	သထုံThayarwady	သာယာဝတီThayet	သရက်Thayetchaung	သရက်ချောင်းThazi	သာစည်Thegon	သဲကုန်းThingangyun	သင်္ဃန်းကျွန်းThongwa	သုံးခွTigyaing	ထီးချိုင့်Tilin	ထီးလင်းTonzang	တွန်းဇံToungup	တောင်ကုတ်Tsawlaw	ဆော့လော်Twantay	တွံတေးWaingmaw	ဝိုင်းမော်Wakema	ဝါးခယ်မWaw	ဝေါWetlet	ဝက်လက်Wundwin	ဝမ်းတွင်းWuntho	ဝန်းသိုYamethin	ရမည်းသင်းYankin	ရန်ကင်းYe	ရေးYe-U	ရေဦးYebyu	ရေဖြူYedashe	ရေတာရှည်Yegyi	ရေကြည်Yenangyaung	ရေနံချောင်းYesagyo	ရေစကြိုYinmarbin	ယင်းမာပင်Ywangan	ရွာငံZa Bu Thi Ri	ဇမ္ဗူသီရိZalun	ဇလွန်Zay Yar Thi Ri	ဇေယျာသီရိZigon	ဇီးကုန်း
State / Division ပြည်နယ်/ တိုင်း * Ayeyarwady	ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးBago (East)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)Bago (West)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)Chin	ချင်းပြည်နယ်Kachin	ကချင်ပြည်နယ်Kayah	ကယားပြည်နယ်Kayin	ကရင်ပြည်နယ်Magway	မကွေးတိုင်းဒေသကြီးMandalay	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးMon	မွန်ပြည်နယ်Nay Pyi Taw	နေပြည်တော်Rakhine	ရခိုင်ပြည်နယ်Sagaing	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးShan (East)	ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့)Shan (North)	ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်)Shan (South)	ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)Tanintharyi	တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးYangon	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Vaccine price for two doses per person will be 60,000 MMK, unless you have been notified otherwise separately by your entity HR. ကာကွယ်ဆေး ဈေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ သက်ဆိုင်ရာ HR မှ သီးသန့်ကြိုတင် အသိပေးအကြောင်းကြားထားခြင်း မရှိပါက လူတစ်ဦးလျှင် ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်အတွက် ၆၀၀၀၀ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
Payment method ငွေပေးချေစနစ် *
Upfront Payment ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု
Deferred Payment ဆိုင်းငံ့ငွေပေးချေမှု
Deferred Payment option is provided by Yoma+ for an admin charge of MMK5000 upon successful registration. Instead of an upfront payment of MMK60,000,amonthly payment of MMK 10,000 each month for6months will be applied beginning the month of the first dose of vaccine. ရိုးမ+ ကိုအသုံးပြု၍ ဆိုင်းငံ့ငွေပေးချေပါက စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအောင်မြင်ပြီးနောက်တွင် ၅,၀၀၀ကျပ် ကို ကနဦးပေးသွင်းရပါမည်။ ထို့နောက် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအတွက် ကျသင့်ငွေ ၆၀,၀၀၀ကျပ် အား တစ်ပြိုင်ထဲ ပေးရမည့်အစား ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ်ထိုးသည့်လမှစ၍ လစဉ် ၁၀,၀၀၀ကျပ် အား ၆လကြာသည်အထိ ပြန်လည်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Please note Yoma Bank and Wave Money staffs will be notified separately on the deferred payment plans offered to them. ရိုးမဘဏ်နှင့် Wave Money ၀န်ထမ်းများအတွက် ဆိုင်းငံ့ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်များကို သီးခြားအကြောင်းကြားပါမည်။
Please select your preferred location: သင်နှစ်သက်သောနေရာကိုရွေးပါ။ * Yangon - Pun Hlaing Dulwich Campus - Pun Hlaing Covid Vaccination Center 7AM-7PMYangon - Star City Galaxy Towers - Pun Hlaing Covid Vaccination Center 7AM-7PMMandalay - (Center location to be confirmed)Taunggyi - (Center location to be confirmed)Others
Do you want to defer your vaccination toalater date? သင်၏ကာကွယ်ဆေးထိုးမည့် ရက်အား နောက်သို့ရွှေ့ဆိုင်းလိုပါသလား? * NoYes
For example if you have been infected with COVID-19 within the last 8 weeks. ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်လွန်ခဲ့သော ၈ ပတ်အတွင်း COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း
Medical Information: ကျန်းမာရေးအချက်အလက်
Are you pregnant now? သင်သည် ယခုလက်ရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နေပါသလား?
Have you previously been infected by COVID-19? သင်သည် Covid ရောဂါ ဖြစ်ဖူးပါသလား။ *
Please specify the first day you felt sick from having COVID-19 (or) tested positive ကျေးဇူးပြု၍ သင် COVID ကူးစက်ခံရကြောင်းစတင်သိရှိသောနေ့ သို့မဟုတ် ပထမဆုံးနေထိုင်မကောင်းသောနေ့ရက်ကို ဖော်ပြပါ။
Do you want to add family member(s)? မိသားစုဝင် (များ) အတွက် စာရင်းပေးသွင်းလိုပါသလား? *
Terms and conditions on the number of family members apply according to your HR policies. စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သော မိသားစုဝင် အရေအတွက်သည် သင်၏သက်ဆိုင်ရာ HR မှချက်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
Family Registration မိသားစုဝင် အတွက် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း
Are you registering for your family only and do not need vaccine for yourself? သင်ကိုယ်တိုင်အတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်ခြင်းမရှိဘဲ သင်၏မိသားစုအတွက်သာစာရင်းပေးသွင်းခြင်း ဖြစ်ပါသလား? *
How many family members (over 18 years old) will also be vaccinated? မိသားစုဝင်ထဲမှ (အသက် ၁၈ နှစ်အထက်) မည်မျှကာကွယ်ဆေးထိုးမည်နည်း?
Help: Just move the slider to the number of family members you want to add. If you want to add more than 10 family members or if you want to add new family member after submission, please contact to your HR head. မှတ်ချက်။ ။ဘားတန်း အား ဘေးသို့ရွှေ့၍ သင်ထည့်သွင်းလိုသော မိသားစုဝင်အရေအတွက်အား ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ မိသားစုဝင် အရေအတွက် ၁၀ဦးထက် ပို၍ ထည့်သွင်းလိုပါက သို့မဟုတ် စာရင်းပေးသွင်းပြီးနောက်မှ မိသားစုဝင် အသစ်အား ထပ်တိုး လိုပါက သင့်၏ HR အကြီးအကဲထံ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။
Deferred Payment ရိုးမ+ ကိုအသုံးပြု၍ ဆိုင်းငံ့ငွေပေးချေမှု
Terms and condition apply according to your respective HR. For deferred payment provided by Yoma+ there is an admin Charge of MMK5000 upon successful registration, and Deferred Payment of MMK 10,000 each month for6months beginning the month of the first dose of vaccine. Please note Yoma Bank and Wave Money staffs will be notified separately on the deferred payment plans offered. စာရင်းပေးသွင်းရန်အတွက် ၅၀၀၀ကျပ်ကို ကနဦးပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပြီး ကျန်ပမာဏကို ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ်ထိုးသည့်လမှစ၍ လစဉ် ၁၀၀၀၀ကျပ်အား ၆လကြာသည်အထိ ပြန်လည်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(Family Member 1) Full name အမည်အပြည့်အစုံ
(Family Member 1) Gender ကျား/မ ရွေးပေးပါ
(Family Member 1) Father's Name ဖခင်နာမည်အပြည့်အစုံကိုရေးပေးပါ
(Family Member 1) Birth Date မွေးနေ့၊ မွေးလ၊ မွေးနှစ် ကိုဖော်ပြပေးပါ။ DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / MM123456789101112 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
(Family Member 1) NRC number or Passport နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/နိုင်ငံကူးမှတ်ပုံတင်အမှတ်ကိုဖော်ပြပေးပါ
(Family Member 1) Phone Number ဖုန်းနံပါတ်
(Family Member 1) State / Division ပြည်နယ်/ တိုင်း Ayeyarwady	ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးBago (East)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)Bago (West)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)Chin	ချင်းပြည်နယ်Kachin	ကချင်ပြည်နယ်Kayah	ကယားပြည်နယ်Kayin	ကရင်ပြည်နယ်Magway	မကွေးတိုင်းဒေသကြီးMandalay	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးMon	မွန်ပြည်နယ်Nay Pyi Taw	နေပြည်တော်Rakhine	ရခိုင်ပြည်နယ်Sagaing	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးShan (East)	ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့)Shan (North)	ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်)Shan (South)	ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)Tanintharyi	တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးYangon	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(Family Member 1) Township မြို့နယ် Ahlone	အလုံAmarapura	အမရပူရAnn	အမ်းAunglan	အောင်လံAungmyaythazan	အောင်မြေသာစံAyadaw	အရာတော်Bago	ပဲခူးBahan	ဗဟန်းBanmauk	ဗန်းမောက်Bawlakhe	ဘောလခဲBhamo	ဗန်းမော်Bilin	ဘီးလင်းBogale	ဘိုကလေးBokpyin	ဘုတ်ပြင်းBotahtaung	ဗိုလ်တထောင်Budalin	ဘုတလင်Buthidaung	ဘူးသီးတောင်Chanayethazan	ချမ်းအေးသာစံChanmyathazi	ချမ်းမြသာစည်Chauk	ချောက်Chaung-U	ချောင်းဦးChaungzon	ချောင်းဆုံChipwi	ချီဖွေCocokyun	ကိုကိုးကျွန်းDagon	ဒဂုံDagon Myothit (East)	ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)Dagon Myothit (North)	ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)Dagon Myothit (Seikkan)	ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)Dagon Myothit (South)	ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)Daik-U	ဒိုက်ဦးDala	ဒလDanubyu	ဓနုဖြူDawbon	ဒေါပုံDawei	ထားဝယ်Dedaye	ဒေးဒရဲDemoso	ဒီမောဆိုDet Khi Na Thi Ri	ဒက္ခိဏသီရိEinme	အိမ်မဲFalam	ဖလမ်းGangaw	ဂန့်ဂေါGwa	ဂွGyobingauk	ကြို့ပင်ကောက်Hakha	ဟားခါးHinthada	ဟင်္သာတHkamti	ခန္တီးHlaing	လှိုင်Hlaingbwe	လှိုင်းဘွဲ့Hlaingtharya	လှိုင်သာယာHlegu	လှည်းကူးHmawbi	မှော်ဘီHomalin	ဟုမ္မလင်းHopang	ဟိုပန်Hopong	ဟိုပုန်းHpa-An	ဘားအံHpakant	ဖားကန့်Hpapun	ဖာပွန်Hpasawng	ဖားဆောင်းHpruso	ဖရူဆိုHseni	သိန္နီHsihseng	ဆီဆိုင်Hsipaw	သီပေါHtantabin	ထန်းတပင်Htantabin	ထန်းတပင်Indaw	အင်းတော်Ingapu	အင်္ဂပူInjangyang	အင်ဂျန်းယန်Insein	အင်းစိန်Kalaw	ကလောKale	ကလေးKalewa	ကလေးဝKamaryut	ကမာရွတ်Kamma	ကံမKanbalu	ကန့်ဘလူKangyidaunt	ကန်ကြီးထောင့်Kani	ကနီKanpetlet	ကန်ပက်လက်Katha	ကသာKawa	ကဝKawhmu	ကော့မှူးKawkareik	ကော့ကရိတ်Kawlin	ကောလင်းKawthoung	ကော့သောင်းKayan	ခရမ်းKengtung	ကျိုင်းတုံKhaunglanhpu	ခေါင်လန်ဖူးKhin-U	ခင်ဦးKonkyan	ကုန်းကြမ်းKungyangon	ကွမ်းခြံကုန်းKunhing	ကွန်ဟိန်းKunlong	ကွမ်းလုံKutkai	ကွတ်ခိုင်Kyaiklat	ကျိုက်လတ်Kyaikmaraw	ကျိုက်မရောKyaikto	ကျိုက်ထိုKyainseikgyi	ကြာအင်းဆိပ်ကြီးKyangin	ကြံခင်းKyaukkyi	ကျောက်ကြီးKyaukme	ကျောက်မဲKyaukpadaung	ကျောက်ပန်းတောင်းKyaukpyu	ကျောက်ဖြူKyaukse	ကျောက်ဆည်Kyauktada	ကျောက်တံတားKyauktaga	ကျောက်တံခါးKyauktan	ကျောက်တန်းKyauktaw	ကျောက်တော်Kyaunggon	ကျောင်းကုန်းKyeemyindaing	ကြည့်မြင်တိုင်Kyethi	ကျေးသီးKyonpyaw	ကျုံပျော်Kyunhla	ကျွန်းလှKyunsu	ကျွန်းစုLabutta	လပွတ္တာLahe	လဟယ်Laihka	လဲချားLangkho	လင်းခေးLanmadaw	လမ်းမတော်Lashio	လားရှိုးLatha	လသာLaukkaing	လောက်ကိုင်Launglon	လောင်းလုံLawksawk	ရပ်စောက်Lay Shi	လေရှီးLemyethna	လေးမျက်နှာLetpadan	လက်ပံတန်းLewe	လယ်ဝေးLoikaw	လွိုင်ကော်Loilen	လွိုင်လင်Mabein	မဘိမ်းMachanbaw	မချမ်းဘောMadaya	မတ္တရာMagway	မကွေးMahaaungmyay	မဟာအောင်မြေMahlaing	မလှိုင်Mansi	မံစီManton	မန်တုံMatman	မက်မန်းMatupi	မတူပီMaubin	မအူပင်Maungdaw	မောင်တောMawkmai	မောက်မယ်Mawlaik	မော်လိုက်Mawlamyine	မော်လမြိုင်Mawlamyinegyun	မော်လမြိုင်ကျွန်းMayangone	မရမ်းကုန်းMeiktila	မိတ္ထီလာMese	မယ်စဲ့Minbu	မင်းဘူးMinbya	မင်းပြားMindat	မင်းတပ်Mindon	မင်းတုန်းMingaladon	မင်္ဂလာဒုံMingalartaungnyunt	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်Mingin	မင်းကင်းMinhla	မင်းလှMinhla	မင်းလှMogaung	မိုးကောင်းMogoke	မိုးကုတ်Mohnyin	မိုးညှင်းMomauk	မိုးမောက်Monghpyak	မိုင်းဖြတ်Monghsat	မိုင်းဆတ်Monghsu	မိုင်းရှူးMongkaing	မိုင်းကိုင်Mongkhet	မိုင်းခတ်Mongla	မိုင်းလားMongmao	မိုင်းမောMongmit	မိုးမိတ်Mongnai	မိုးနဲMongpan	မိုင်းပန်Mongping	မိုင်းပျဥ်းMongton	မိုင်းတုံMongyai	မိုင်းရယ်Mongyang	မိုင်းယန်းMongyawng	မိုင်းယောင်းMonyo	မိုးညိုMonywa	မုံရွာMrauk-U	မြောက်ဦးMudon	မုဒုံMunaung	မာန်အောင်Muse	မူဆယ်Myaing	မြိုင်Myanaung	မြန်အောင်Myaung	မြောင်Myaungmya	မြောင်းမြMyawaddy	မြဝတီMyebon	မြေပုံMyeik	မြိတ်Myingyan	မြင်းခြံMyinmu	မြင်းမူMyitkyina	မြစ်ကြီးနားMyittha	မြစ်သားMyothit	မြို့သစ်Namhkan	နမ့်ခမ်းNamhsan	နမ့်ဆန်Namtu	နမ္မတူNansang	နမ့်စန်Nanyun	နန်းယွန်းNarphan	နားဖန်းNatmauk	နတ်မောက်Natogyi	နွားထိုးကြီးNattalin	နတ်တလင်းNawnghkio	နောင်ချိုNawngmun	နောင်မွန်းNgape	ငဖဲNgapudaw	ငပုတောNgazun	ငါန်းဇွန်North Okkalapa	မြောက်ဥက္ကလာပNyaung-U	ညောင်ဦးNyaungdon	ညောင်တုန်းNyaunglebin	ညောင်လေးပင်Nyaungshwe	ညောင်ရွှေOke Ta Ra Thi Ri	ဥတ္တရသီရိOkpho	အုတ်ဖိုOktwin	အုတ်တွင်းPabedan	ပန်းဘဲတန်းPadaung	ပန်းတောင်းPakokku	ပခုက္ကူPalaw	ပုလောPale	ပုလဲPaletwa	ပလက်ဝPangsang	ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)Pangwaun	ပန်ဝိုင်Pantanaw	ပန်းတနော်Pathein	ပုသိမ်Patheingyi	ပုသိမ်ကြီးPauk	ပေါက်Paukkhaung	ပေါက်ခေါင်းPauktaw	ပေါက်တောPaung	ပေါင်Paungbyin	ဖောင်းပြင်Paungde	ပေါင်းတည်Pazundaung	ပုဇွန်တောင်Pekon	ဖယ်ခုံPhyu	ဖြူးPindaya	ပင်းတယPinlaung	ပင်လောင်းPinlebu	ပင်လည်ဘူးPoke Ba Thi Ri	ပုဗ္ဗသီရိPonnagyun	ပုဏ္ဏားကျွန်းPuta-O	ပူတာအိုPwintbyu	ပွင့်ဖြူPyapon	ဖျာပုံPyawbwe	ပျော်ဘွယ်Pyay	ပြည်Pyigyitagon	ပြည်ကြီးတံခွန်Pyinmana	ပျဉ်းမနားPyinoolwin	ပြင်ဦးလွင်Ramree	ရမ်းဗြဲRathedaung	ရသေ့တောင်Sagaing	စစ်ကိုင်းSalin	စလင်းSalingyi	ဆားလင်းကြီးSanchaung	စမ်းချောင်းSaw	ဆောSeikgyikanaungto	ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုSeikkan	ဆိပ်ကမ်းSeikphyu	ဆိပ်ဖြူShadaw	ရှားတောShwebo	ရွှေဘိုShwedaung	ရွှေတောင်Shwegu	ရွှေကူShwegyin	ရွှေကျင်Shwepyithar	ရွှေပြည်သာSidoktaya	စေတုတ္တရာSinbaungwe	ဆင်ပေါင်ဝဲSingu	စဥ့်ကူးSintgaing	စဉ့်ကိုင်Sittwe	စစ်တွေSouth Okkalapa	တောင်ဥက္ကလာပSumprabum	ဆွမ်ပရာဘွမ်Tabayin	ဒီပဲယင်းTachileik	တာချီလိတ်Tada-U	တံတားဦးTaikkyi	တိုက်ကြီးTamu	တမူးTamwe	တာမွေTanai	တနိုင်းTangyan	တန့်ယန်းTanintharyi	တနင်္သာရီTatkon	တပ်ကုန်းTaungdwingyi	တောင်တွင်းကြီးTaunggyi	တောင်ကြီးTaungoo	တောင်ငူTaungtha	တောင်သာTaze	တန့်ဆည်Tedim	တီးတိန်Thabaung	သာပေါင်းThabeikkyin	သပိတ်ကျင်းThaketa	သာကေတThanatpin	သနပ်ပင်Thanbyuzayat	သံဖြူဇရပ်Thandaunggyi	သံတောင်ကြီးThandwe	သံတွဲThanlyin	သန်လျင်Thantlang	ထန်တလန်Thaton	သထုံThayarwady	သာယာဝတီThayet	သရက်Thayetchaung	သရက်ချောင်းThazi	သာစည်Thegon	သဲကုန်းThingangyun	သင်္ဃန်းကျွန်းThongwa	သုံးခွTigyaing	ထီးချိုင့်Tilin	ထီးလင်းTonzang	တွန်းဇံToungup	တောင်ကုတ်Tsawlaw	ဆော့လော်Twantay	တွံတေးWaingmaw	ဝိုင်းမော်Wakema	ဝါးခယ်မWaw	ဝေါWetlet	ဝက်လက်Wundwin	ဝမ်းတွင်းWuntho	ဝန်းသိုYamethin	ရမည်းသင်းYankin	ရန်ကင်းYe	ရေးYe-U	ရေဦးYebyu	ရေဖြူYedashe	ရေတာရှည်Yegyi	ရေကြည်Yenangyaung	ရေနံချောင်းYesagyo	ရေစကြိုYinmarbin	ယင်းမာပင်Ywangan	ရွာငံZa Bu Thi Ri	ဇမ္ဗူသီရိZalun	ဇလွန်Zay Yar Thi Ri	ဇေယျာသီရိZigon	ဇီးကုန်း
(Family Member 1) Permanent Address အမြဲတမ်းနေသော နေရပ်လိပ်စာ
(Family Member 2) Full name အမည်အပြည့်အစုံ
(Family Member 2) Gender ကျား/မ ရွေးပေးပါ
(Family Member 2) Father's Name ဖခင်နာမည်အပြည့်အစုံကိုရေးပေးပါ
(Family Member 2) Birth Date မွေးနေ့၊ မွေးလ၊ မွေးနှစ် ကိုဖော်ပြပေးပါ။ DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / MM123456789101112 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
(Family Member 2) NRC number or Passport နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/နိုင်ငံကူးမှတ်ပုံတင်အမှတ်ကိုဖော်ပြပေးပါ
(Family Member 2) Phone Number ဖုန်းနံပါတ်
(Family Member 2) State / Division ပြည်နယ်/ တိုင်း Ayeyarwady	ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးBago (East)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)Bago (West)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)Chin	ချင်းပြည်နယ်Kachin	ကချင်ပြည်နယ်Kayah	ကယားပြည်နယ်Kayin	ကရင်ပြည်နယ်Magway	မကွေးတိုင်းဒေသကြီးMandalay	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးMon	မွန်ပြည်နယ်Nay Pyi Taw	နေပြည်တော်Rakhine	ရခိုင်ပြည်နယ်Sagaing	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးShan (East)	ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့)Shan (North)	ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်)Shan (South)	ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)Tanintharyi	တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးYangon	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(Family Member 2) Township မြို့နယ် Ahlone	အလုံAmarapura	အမရပူရAnn	အမ်းAunglan	အောင်လံAungmyaythazan	အောင်မြေသာစံAyadaw	အရာတော်Bago	ပဲခူးBahan	ဗဟန်းBanmauk	ဗန်းမောက်Bawlakhe	ဘောလခဲBhamo	ဗန်းမော်Bilin	ဘီးလင်းBogale	ဘိုကလေးBokpyin	ဘုတ်ပြင်းBotahtaung	ဗိုလ်တထောင်Budalin	ဘုတလင်Buthidaung	ဘူးသီးတောင်Chanayethazan	ချမ်းအေးသာစံChanmyathazi	ချမ်းမြသာစည်Chauk	ချောက်Chaung-U	ချောင်းဦးChaungzon	ချောင်းဆုံChipwi	ချီဖွေCocokyun	ကိုကိုးကျွန်းDagon	ဒဂုံDagon Myothit (East)	ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)Dagon Myothit (North)	ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)Dagon Myothit (Seikkan)	ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)Dagon Myothit (South)	ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)Daik-U	ဒိုက်ဦးDala	ဒလDanubyu	ဓနုဖြူDawbon	ဒေါပုံDawei	ထားဝယ်Dedaye	ဒေးဒရဲDemoso	ဒီမောဆိုDet Khi Na Thi Ri	ဒက္ခိဏသီရိEinme	အိမ်မဲFalam	ဖလမ်းGangaw	ဂန့်ဂေါGwa	ဂွGyobingauk	ကြို့ပင်ကောက်Hakha	ဟားခါးHinthada	ဟင်္သာတHkamti	ခန္တီးHlaing	လှိုင်Hlaingbwe	လှိုင်းဘွဲ့Hlaingtharya	လှိုင်သာယာHlegu	လှည်းကူးHmawbi	မှော်ဘီHomalin	ဟုမ္မလင်းHopang	ဟိုပန်Hopong	ဟိုပုန်းHpa-An	ဘားအံHpakant	ဖားကန့်Hpapun	ဖာပွန်Hpasawng	ဖားဆောင်းHpruso	ဖရူဆိုHseni	သိန္နီHsihseng	ဆီဆိုင်Hsipaw	သီပေါHtantabin	ထန်းတပင်Htantabin	ထန်းတပင်Indaw	အင်းတော်Ingapu	အင်္ဂပူInjangyang	အင်ဂျန်းယန်Insein	အင်းစိန်Kalaw	ကလောKale	ကလေးKalewa	ကလေးဝKamaryut	ကမာရွတ်Kamma	ကံမKanbalu	ကန့်ဘလူKangyidaunt	ကန်ကြီးထောင့်Kani	ကနီKanpetlet	ကန်ပက်လက်Katha	ကသာKawa	ကဝKawhmu	ကော့မှူးKawkareik	ကော့ကရိတ်Kawlin	ကောလင်းKawthoung	ကော့သောင်းKayan	ခရမ်းKengtung	ကျိုင်းတုံKhaunglanhpu	ခေါင်လန်ဖူးKhin-U	ခင်ဦးKonkyan	ကုန်းကြမ်းKungyangon	ကွမ်းခြံကုန်းKunhing	ကွန်ဟိန်းKunlong	ကွမ်းလုံKutkai	ကွတ်ခိုင်Kyaiklat	ကျိုက်လတ်Kyaikmaraw	ကျိုက်မရောKyaikto	ကျိုက်ထိုKyainseikgyi	ကြာအင်းဆိပ်ကြီးKyangin	ကြံခင်းKyaukkyi	ကျောက်ကြီးKyaukme	ကျောက်မဲKyaukpadaung	ကျောက်ပန်းတောင်းKyaukpyu	ကျောက်ဖြူKyaukse	ကျောက်ဆည်Kyauktada	ကျောက်တံတားKyauktaga	ကျောက်တံခါးKyauktan	ကျောက်တန်းKyauktaw	ကျောက်တော်Kyaunggon	ကျောင်းကုန်းKyeemyindaing	ကြည့်မြင်တိုင်Kyethi	ကျေးသီးKyonpyaw	ကျုံပျော်Kyunhla	ကျွန်းလှKyunsu	ကျွန်းစုLabutta	လပွတ္တာLahe	လဟယ်Laihka	လဲချားLangkho	လင်းခေးLanmadaw	လမ်းမတော်Lashio	လားရှိုးLatha	လသာLaukkaing	လောက်ကိုင်Launglon	လောင်းလုံLawksawk	ရပ်စောက်Lay Shi	လေရှီးLemyethna	လေးမျက်နှာLetpadan	လက်ပံတန်းLewe	လယ်ဝေးLoikaw	လွိုင်ကော်Loilen	လွိုင်လင်Mabein	မဘိမ်းMachanbaw	မချမ်းဘောMadaya	မတ္တရာMagway	မကွေးMahaaungmyay	မဟာအောင်မြေMahlaing	မလှိုင်Mansi	မံစီManton	မန်တုံMatman	မက်မန်းMatupi	မတူပီMaubin	မအူပင်Maungdaw	မောင်တောMawkmai	မောက်မယ်Mawlaik	မော်လိုက်Mawlamyine	မော်လမြိုင်Mawlamyinegyun	မော်လမြိုင်ကျွန်းMayangone	မရမ်းကုန်းMeiktila	မိတ္ထီလာMese	မယ်စဲ့Minbu	မင်းဘူးMinbya	မင်းပြားMindat	မင်းတပ်Mindon	မင်းတုန်းMingaladon	မင်္ဂလာဒုံMingalartaungnyunt	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်Mingin	မင်းကင်းMinhla	မင်းလှMinhla	မင်းလှMogaung	မိုးကောင်းMogoke	မိုးကုတ်Mohnyin	မိုးညှင်းMomauk	မိုးမောက်Monghpyak	မိုင်းဖြတ်Monghsat	မိုင်းဆတ်Monghsu	မိုင်းရှူးMongkaing	မိုင်းကိုင်Mongkhet	မိုင်းခတ်Mongla	မိုင်းလားMongmao	မိုင်းမောMongmit	မိုးမိတ်Mongnai	မိုးနဲMongpan	မိုင်းပန်Mongping	မိုင်းပျဥ်းMongton	မိုင်းတုံMongyai	မိုင်းရယ်Mongyang	မိုင်းယန်းMongyawng	မိုင်းယောင်းMonyo	မိုးညိုMonywa	မုံရွာMrauk-U	မြောက်ဦးMudon	မုဒုံMunaung	မာန်အောင်Muse	မူဆယ်Myaing	မြိုင်Myanaung	မြန်အောင်Myaung	မြောင်Myaungmya	မြောင်းမြMyawaddy	မြဝတီMyebon	မြေပုံMyeik	မြိတ်Myingyan	မြင်းခြံMyinmu	မြင်းမူMyitkyina	မြစ်ကြီးနားMyittha	မြစ်သားMyothit	မြို့သစ်Namhkan	နမ့်ခမ်းNamhsan	နမ့်ဆန်Namtu	နမ္မတူNansang	နမ့်စန်Nanyun	နန်းယွန်းNarphan	နားဖန်းNatmauk	နတ်မောက်Natogyi	နွားထိုးကြီးNattalin	နတ်တလင်းNawnghkio	နောင်ချိုNawngmun	နောင်မွန်းNgape	ငဖဲNgapudaw	ငပုတောNgazun	ငါန်းဇွန်North Okkalapa	မြောက်ဥက္ကလာပNyaung-U	ညောင်ဦးNyaungdon	ညောင်တုန်းNyaunglebin	ညောင်လေးပင်Nyaungshwe	ညောင်ရွှေOke Ta Ra Thi Ri	ဥတ္တရသီရိOkpho	အုတ်ဖိုOktwin	အုတ်တွင်းPabedan	ပန်းဘဲတန်းPadaung	ပန်းတောင်းPakokku	ပခုက္ကူPalaw	ပုလောPale	ပုလဲPaletwa	ပလက်ဝPangsang	ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)Pangwaun	ပန်ဝိုင်Pantanaw	ပန်းတနော်Pathein	ပုသိမ်Patheingyi	ပုသိမ်ကြီးPauk	ပေါက်Paukkhaung	ပေါက်ခေါင်းPauktaw	ပေါက်တောPaung	ပေါင်Paungbyin	ဖောင်းပြင်Paungde	ပေါင်းတည်Pazundaung	ပုဇွန်တောင်Pekon	ဖယ်ခုံPhyu	ဖြူးPindaya	ပင်းတယPinlaung	ပင်လောင်းPinlebu	ပင်လည်ဘူးPoke Ba Thi Ri	ပုဗ္ဗသီရိPonnagyun	ပုဏ္ဏားကျွန်းPuta-O	ပူတာအိုPwintbyu	ပွင့်ဖြူPyapon	ဖျာပုံPyawbwe	ပျော်ဘွယ်Pyay	ပြည်Pyigyitagon	ပြည်ကြီးတံခွန်Pyinmana	ပျဉ်းမနားPyinoolwin	ပြင်ဦးလွင်Ramree	ရမ်းဗြဲRathedaung	ရသေ့တောင်Sagaing	စစ်ကိုင်းSalin	စလင်းSalingyi	ဆားလင်းကြီးSanchaung	စမ်းချောင်းSaw	ဆောSeikgyikanaungto	ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုSeikkan	ဆိပ်ကမ်းSeikphyu	ဆိပ်ဖြူShadaw	ရှားတောShwebo	ရွှေဘိုShwedaung	ရွှေတောင်Shwegu	ရွှေကူShwegyin	ရွှေကျင်Shwepyithar	ရွှေပြည်သာSidoktaya	စေတုတ္တရာSinbaungwe	ဆင်ပေါင်ဝဲSingu	စဥ့်ကူးSintgaing	စဉ့်ကိုင်Sittwe	စစ်တွေSouth Okkalapa	တောင်ဥက္ကလာပSumprabum	ဆွမ်ပရာဘွမ်Tabayin	ဒီပဲယင်းTachileik	တာချီလိတ်Tada-U	တံတားဦးTaikkyi	တိုက်ကြီးTamu	တမူးTamwe	တာမွေTanai	တနိုင်းTangyan	တန့်ယန်းTanintharyi	တနင်္သာရီTatkon	တပ်ကုန်းTaungdwingyi	တောင်တွင်းကြီးTaunggyi	တောင်ကြီးTaungoo	တောင်ငူTaungtha	တောင်သာTaze	တန့်ဆည်Tedim	တီးတိန်Thabaung	သာပေါင်းThabeikkyin	သပိတ်ကျင်းThaketa	သာကေတThanatpin	သနပ်ပင်Thanbyuzayat	သံဖြူဇရပ်Thandaunggyi	သံတောင်ကြီးThandwe	သံတွဲThanlyin	သန်လျင်Thantlang	ထန်တလန်Thaton	သထုံThayarwady	သာယာဝတီThayet	သရက်Thayetchaung	သရက်ချောင်းThazi	သာစည်Thegon	သဲကုန်းThingangyun	သင်္ဃန်းကျွန်းThongwa	သုံးခွTigyaing	ထီးချိုင့်Tilin	ထီးလင်းTonzang	တွန်းဇံToungup	တောင်ကုတ်Tsawlaw	ဆော့လော်Twantay	တွံတေးWaingmaw	ဝိုင်းမော်Wakema	ဝါးခယ်မWaw	ဝေါWetlet	ဝက်လက်Wundwin	ဝမ်းတွင်းWuntho	ဝန်းသိုYamethin	ရမည်းသင်းYankin	ရန်ကင်းYe	ရေးYe-U	ရေဦးYebyu	ရေဖြူYedashe	ရေတာရှည်Yegyi	ရေကြည်Yenangyaung	ရေနံချောင်းYesagyo	ရေစကြိုYinmarbin	ယင်းမာပင်Ywangan	ရွာငံZa Bu Thi Ri	ဇမ္ဗူသီရိZalun	ဇလွန်Zay Yar Thi Ri	ဇေယျာသီရိZigon	ဇီးကုန်း
(Family Member 2) Permanent Address အမြဲတမ်းနေသော နေရပ်လိပ်စာ
(Family Member 3) Full name အမည်အပြည့်အစုံ
(Family Member 3) Gender ကျား/မ ရွေးပေးပါ
(Family Member 3) Father's Name ဖခင်နာမည်အပြည့်အစုံကိုရေးပေးပါ
(Family Member 3) Birth Date မွေးနေ့၊ မွေးလ၊ မွေးနှစ် ကိုဖော်ပြပေးပါ။ DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / MM123456789101112 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
(Family Member 3) NRC number or Passport နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/နိုင်ငံကူးမှတ်ပုံတင်အမှတ်ကိုဖော်ပြပေးပ
(Family Member 3) Phone Number ဖုန်းနံပါတ်
(Family Member 3) State / Division ပြည်နယ်/ တိုင်း Ayeyarwady	ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးBago (East)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)Bago (West)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)Chin	ချင်းပြည်နယ်Kachin	ကချင်ပြည်နယ်Kayah	ကယားပြည်နယ်Kayin	ကရင်ပြည်နယ်Magway	မကွေးတိုင်းဒေသကြီးMandalay	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးMon	မွန်ပြည်နယ်Nay Pyi Taw	နေပြည်တော်Rakhine	ရခိုင်ပြည်နယ်Sagaing	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးShan (East)	ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့)Shan (North)	ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်)Shan (South)	ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)Tanintharyi	တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးYangon	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(Family Member 3) Township မြို့နယ် Ahlone	အလုံAmarapura	အမရပူရAnn	အမ်းAunglan	အောင်လံAungmyaythazan	အောင်မြေသာစံAyadaw	အရာတော်Bago	ပဲခူးBahan	ဗဟန်းBanmauk	ဗန်းမောက်Bawlakhe	ဘောလခဲBhamo	ဗန်းမော်Bilin	ဘီးလင်းBogale	ဘိုကလေးBokpyin	ဘုတ်ပြင်းBotahtaung	ဗိုလ်တထောင်Budalin	ဘုတလင်Buthidaung	ဘူးသီးတောင်Chanayethazan	ချမ်းအေးသာစံChanmyathazi	ချမ်းမြသာစည်Chauk	ချောက်Chaung-U	ချောင်းဦးChaungzon	ချောင်းဆုံChipwi	ချီဖွေCocokyun	ကိုကိုးကျွန်းDagon	ဒဂုံDagon Myothit (East)	ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)Dagon Myothit (North)	ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)Dagon Myothit (Seikkan)	ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)Dagon Myothit (South)	ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)Daik-U	ဒိုက်ဦးDala	ဒလDanubyu	ဓနုဖြူDawbon	ဒေါပုံDawei	ထားဝယ်Dedaye	ဒေးဒရဲDemoso	ဒီမောဆိုDet Khi Na Thi Ri	ဒက္ခိဏသီရိEinme	အိမ်မဲFalam	ဖလမ်းGangaw	ဂန့်ဂေါGwa	ဂွGyobingauk	ကြို့ပင်ကောက်Hakha	ဟားခါးHinthada	ဟင်္သာတHkamti	ခန္တီးHlaing	လှိုင်Hlaingbwe	လှိုင်းဘွဲ့Hlaingtharya	လှိုင်သာယာHlegu	လှည်းကူးHmawbi	မှော်ဘီHomalin	ဟုမ္မလင်းHopang	ဟိုပန်Hopong	ဟိုပုန်းHpa-An	ဘားအံHpakant	ဖားကန့်Hpapun	ဖာပွန်Hpasawng	ဖားဆောင်းHpruso	ဖရူဆိုHseni	သိန္နီHsihseng	ဆီဆိုင်Hsipaw	သီပေါHtantabin	ထန်းတပင်Htantabin	ထန်းတပင်Indaw	အင်းတော်Ingapu	အင်္ဂပူInjangyang	အင်ဂျန်းယန်Insein	အင်းစိန်Kalaw	ကလောKale	ကလေးKalewa	ကလေးဝKamaryut	ကမာရွတ်Kamma	ကံမKanbalu	ကန့်ဘလူKangyidaunt	ကန်ကြီးထောင့်Kani	ကနီKanpetlet	ကန်ပက်လက်Katha	ကသာKawa	ကဝKawhmu	ကော့မှူးKawkareik	ကော့ကရိတ်Kawlin	ကောလင်းKawthoung	ကော့သောင်းKayan	ခရမ်းKengtung	ကျိုင်းတုံKhaunglanhpu	ခေါင်လန်ဖူးKhin-U	ခင်ဦးKonkyan	ကုန်းကြမ်းKungyangon	ကွမ်းခြံကုန်းKunhing	ကွန်ဟိန်းKunlong	ကွမ်းလုံKutkai	ကွတ်ခိုင်Kyaiklat	ကျိုက်လတ်Kyaikmaraw	ကျိုက်မရောKyaikto	ကျိုက်ထိုKyainseikgyi	ကြာအင်းဆိပ်ကြီးKyangin	ကြံခင်းKyaukkyi	ကျောက်ကြီးKyaukme	ကျောက်မဲKyaukpadaung	ကျောက်ပန်းတောင်းKyaukpyu	ကျောက်ဖြူKyaukse	ကျောက်ဆည်Kyauktada	ကျောက်တံတားKyauktaga	ကျောက်တံခါးKyauktan	ကျောက်တန်းKyauktaw	ကျောက်တော်Kyaunggon	ကျောင်းကုန်းKyeemyindaing	ကြည့်မြင်တိုင်Kyethi	ကျေးသီးKyonpyaw	ကျုံပျော်Kyunhla	ကျွန်းလှKyunsu	ကျွန်းစုLabutta	လပွတ္တာLahe	လဟယ်Laihka	လဲချားLangkho	လင်းခေးLanmadaw	လမ်းမတော်Lashio	လားရှိုးLatha	လသာLaukkaing	လောက်ကိုင်Launglon	လောင်းလုံLawksawk	ရပ်စောက်Lay Shi	လေရှီးLemyethna	လေးမျက်နှာLetpadan	လက်ပံတန်းLewe	လယ်ဝေးLoikaw	လွိုင်ကော်Loilen	လွိုင်လင်Mabein	မဘိမ်းMachanbaw	မချမ်းဘောMadaya	မတ္တရာMagway	မကွေးMahaaungmyay	မဟာအောင်မြေMahlaing	မလှိုင်Mansi	မံစီManton	မန်တုံMatman	မက်မန်းMatupi	မတူပီMaubin	မအူပင်Maungdaw	မောင်တောMawkmai	မောက်မယ်Mawlaik	မော်လိုက်Mawlamyine	မော်လမြိုင်Mawlamyinegyun	မော်လမြိုင်ကျွန်းMayangone	မရမ်းကုန်းMeiktila	မိတ္ထီလာMese	မယ်စဲ့Minbu	မင်းဘူးMinbya	မင်းပြားMindat	မင်းတပ်Mindon	မင်းတုန်းMingaladon	မင်္ဂလာဒုံMingalartaungnyunt	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်Mingin	မင်းကင်းMinhla	မင်းလှMinhla	မင်းလှMogaung	မိုးကောင်းMogoke	မိုးကုတ်Mohnyin	မိုးညှင်းMomauk	မိုးမောက်Monghpyak	မိုင်းဖြတ်Monghsat	မိုင်းဆတ်Monghsu	မိုင်းရှူးMongkaing	မိုင်းကိုင်Mongkhet	မိုင်းခတ်Mongla	မိုင်းလားMongmao	မိုင်းမောMongmit	မိုးမိတ်Mongnai	မိုးနဲMongpan	မိုင်းပန်Mongping	မိုင်းပျဥ်းMongton	မိုင်းတုံMongyai	မိုင်းရယ်Mongyang	မိုင်းယန်းMongyawng	မိုင်းယောင်းMonyo	မိုးညိုMonywa	မုံရွာMrauk-U	မြောက်ဦးMudon	မုဒုံMunaung	မာန်အောင်Muse	မူဆယ်Myaing	မြိုင်Myanaung	မြန်အောင်Myaung	မြောင်Myaungmya	မြောင်းမြMyawaddy	မြဝတီMyebon	မြေပုံMyeik	မြိတ်Myingyan	မြင်းခြံMyinmu	မြင်းမူMyitkyina	မြစ်ကြီးနားMyittha	မြစ်သားMyothit	မြို့သစ်Namhkan	နမ့်ခမ်းNamhsan	နမ့်ဆန်Namtu	နမ္မတူNansang	နမ့်စန်Nanyun	နန်းယွန်းNarphan	နားဖန်းNatmauk	နတ်မောက်Natogyi	နွားထိုးကြီးNattalin	နတ်တလင်းNawnghkio	နောင်ချိုNawngmun	နောင်မွန်းNgape	ငဖဲNgapudaw	ငပုတောNgazun	ငါန်းဇွန်North Okkalapa	မြောက်ဥက္ကလာပNyaung-U	ညောင်ဦးNyaungdon	ညောင်တုန်းNyaunglebin	ညောင်လေးပင်Nyaungshwe	ညောင်ရွှေOke Ta Ra Thi Ri	ဥတ္တရသီရိOkpho	အုတ်ဖိုOktwin	အုတ်တွင်းPabedan	ပန်းဘဲတန်းPadaung	ပန်းတောင်းPakokku	ပခုက္ကူPalaw	ပုလောPale	ပုလဲPaletwa	ပလက်ဝPangsang	ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)Pangwaun	ပန်ဝိုင်Pantanaw	ပန်းတနော်Pathein	ပုသိမ်Patheingyi	ပုသိမ်ကြီးPauk	ပေါက်Paukkhaung	ပေါက်ခေါင်းPauktaw	ပေါက်တောPaung	ပေါင်Paungbyin	ဖောင်းပြင်Paungde	ပေါင်းတည်Pazundaung	ပုဇွန်တောင်Pekon	ဖယ်ခုံPhyu	ဖြူးPindaya	ပင်းတယPinlaung	ပင်လောင်းPinlebu	ပင်လည်ဘူးPoke Ba Thi Ri	ပုဗ္ဗသီရိPonnagyun	ပုဏ္ဏားကျွန်းPuta-O	ပူတာအိုPwintbyu	ပွင့်ဖြူPyapon	ဖျာပုံPyawbwe	ပျော်ဘွယ်Pyay	ပြည်Pyigyitagon	ပြည်ကြီးတံခွန်Pyinmana	ပျဉ်းမနားPyinoolwin	ပြင်ဦးလွင်Ramree	ရမ်းဗြဲRathedaung	ရသေ့တောင်Sagaing	စစ်ကိုင်းSalin	စလင်းSalingyi	ဆားလင်းကြီးSanchaung	စမ်းချောင်းSaw	ဆောSeikgyikanaungto	ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုSeikkan	ဆိပ်ကမ်းSeikphyu	ဆိပ်ဖြူShadaw	ရှားတောShwebo	ရွှေဘိုShwedaung	ရွှေတောင်Shwegu	ရွှေကူShwegyin	ရွှေကျင်Shwepyithar	ရွှေပြည်သာSidoktaya	စေတုတ္တရာSinbaungwe	ဆင်ပေါင်ဝဲSingu	စဥ့်ကူးSintgaing	စဉ့်ကိုင်Sittwe	စစ်တွေSouth Okkalapa	တောင်ဥက္ကလာပSumprabum	ဆွမ်ပရာဘွမ်Tabayin	ဒီပဲယင်းTachileik	တာချီလိတ်Tada-U	တံတားဦးTaikkyi	တိုက်ကြီးTamu	တမူးTamwe	တာမွေTanai	တနိုင်းTangyan	တန့်ယန်းTanintharyi	တနင်္သာရီTatkon	တပ်ကုန်းTaungdwingyi	တောင်တွင်းကြီးTaunggyi	တောင်ကြီးTaungoo	တောင်ငူTaungtha	တောင်သာTaze	တန့်ဆည်Tedim	တီးတိန်Thabaung	သာပေါင်းThabeikkyin	သပိတ်ကျင်းThaketa	သာကေတThanatpin	သနပ်ပင်Thanbyuzayat	သံဖြူဇရပ်Thandaunggyi	သံတောင်ကြီးThandwe	သံတွဲThanlyin	သန်လျင်Thantlang	ထန်တလန်Thaton	သထုံThayarwady	သာယာဝတီThayet	သရက်Thayetchaung	သရက်ချောင်းThazi	သာစည်Thegon	သဲကုန်းThingangyun	သင်္ဃန်းကျွန်းThongwa	သုံးခွTigyaing	ထီးချိုင့်Tilin	ထီးလင်းTonzang	တွန်းဇံToungup	တောင်ကုတ်Tsawlaw	ဆော့လော်Twantay	တွံတေးWaingmaw	ဝိုင်းမော်Wakema	ဝါးခယ်မWaw	ဝေါWetlet	ဝက်လက်Wundwin	ဝမ်းတွင်းWuntho	ဝန်းသိုYamethin	ရမည်းသင်းYankin	ရန်ကင်းYe	ရေးYe-U	ရေဦးYebyu	ရေဖြူYedashe	ရေတာရှည်Yegyi	ရေကြည်Yenangyaung	ရေနံချောင်းYesagyo	ရေစကြိုYinmarbin	ယင်းမာပင်Ywangan	ရွာငံZa Bu Thi Ri	ဇမ္ဗူသီရိZalun	ဇလွန်Zay Yar Thi Ri	ဇေယျာသီရိZigon	ဇီးကုန်း
(Family Member 3) Permanent Address အမြဲတမ်းနေသော နေရပ်လိပ်စာ
(Family Member 4) Full name အမည်အပြည့်အစုံ
(Family Member 4) Gender ကျား/မ ရွေးပေးပါ
(Family Member 4) NRC number or Passport နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/နိုင်ငံကူးမှတ်ပုံတင်အမှတ်ကိုဖော်ပြပေးပ
(Family Member 4) Father's Name ဖခင်နာမည်အပြည့်အစုံကိုရေးပေးပါ
(Family Member 4) Birth Date မွေးနေ့၊ မွေးလ၊ မွေးနှစ် ကိုဖော်ပြပေးပါ။ DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / MM123456789101112 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
(Family Member 4) Phone Number ဖုန်းနံပါတ်
(Family Member 4) State / Division ပြည်နယ်/ တိုင်း Ayeyarwady	ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးBago (East)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)Bago (West)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)Chin	ချင်းပြည်နယ်Kachin	ကချင်ပြည်နယ်Kayah	ကယားပြည်နယ်Kayin	ကရင်ပြည်နယ်Magway	မကွေးတိုင်းဒေသကြီးMandalay	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးMon	မွန်ပြည်နယ်Nay Pyi Taw	နေပြည်တော်Rakhine	ရခိုင်ပြည်နယ်Sagaing	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးShan (East)	ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့)Shan (North)	ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်)Shan (South)	ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)Tanintharyi	တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးYangon	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(Family Member 4) Township မြို့နယ် Ahlone	အလုံAmarapura	အမရပူရAnn	အမ်းAunglan	အောင်လံAungmyaythazan	အောင်မြေသာစံAyadaw	အရာတော်Bago	ပဲခူးBahan	ဗဟန်းBanmauk	ဗန်းမောက်Bawlakhe	ဘောလခဲBhamo	ဗန်းမော်Bilin	ဘီးလင်းBogale	ဘိုကလေးBokpyin	ဘုတ်ပြင်းBotahtaung	ဗိုလ်တထောင်Budalin	ဘုတလင်Buthidaung	ဘူးသီးတောင်Chanayethazan	ချမ်းအေးသာစံChanmyathazi	ချမ်းမြသာစည်Chauk	ချောက်Chaung-U	ချောင်းဦးChaungzon	ချောင်းဆုံChipwi	ချီဖွေCocokyun	ကိုကိုးကျွန်းDagon	ဒဂုံDagon Myothit (East)	ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)Dagon Myothit (North)	ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)Dagon Myothit (Seikkan)	ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)Dagon Myothit (South)	ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)Daik-U	ဒိုက်ဦးDala	ဒလDanubyu	ဓနုဖြူDawbon	ဒေါပုံDawei	ထားဝယ်Dedaye	ဒေးဒရဲDemoso	ဒီမောဆိုDet Khi Na Thi Ri	ဒက္ခိဏသီရိEinme	အိမ်မဲFalam	ဖလမ်းGangaw	ဂန့်ဂေါGwa	ဂွGyobingauk	ကြို့ပင်ကောက်Hakha	ဟားခါးHinthada	ဟင်္သာတHkamti	ခန္တီးHlaing	လှိုင်Hlaingbwe	လှိုင်းဘွဲ့Hlaingtharya	လှိုင်သာယာHlegu	လှည်းကူးHmawbi	မှော်ဘီHomalin	ဟုမ္မလင်းHopang	ဟိုပန်Hopong	ဟိုပုန်းHpa-An	ဘားအံHpakant	ဖားကန့်Hpapun	ဖာပွန်Hpasawng	ဖားဆောင်းHpruso	ဖရူဆိုHseni	သိန္နီHsihseng	ဆီဆိုင်Hsipaw	သီပေါHtantabin	ထန်းတပင်Htantabin	ထန်းတပင်Indaw	အင်းတော်Ingapu	အင်္ဂပူInjangyang	အင်ဂျန်းယန်Insein	အင်းစိန်Kalaw	ကလောKale	ကလေးKalewa	ကလေးဝKamaryut	ကမာရွတ်Kamma	ကံမKanbalu	ကန့်ဘလူKangyidaunt	ကန်ကြီးထောင့်Kani	ကနီKanpetlet	ကန်ပက်လက်Katha	ကသာKawa	ကဝKawhmu	ကော့မှူးKawkareik	ကော့ကရိတ်Kawlin	ကောလင်းKawthoung	ကော့သောင်းKayan	ခရမ်းKengtung	ကျိုင်းတုံKhaunglanhpu	ခေါင်လန်ဖူးKhin-U	ခင်ဦးKonkyan	ကုန်းကြမ်းKungyangon	ကွမ်းခြံကုန်းKunhing	ကွန်ဟိန်းKunlong	ကွမ်းလုံKutkai	ကွတ်ခိုင်Kyaiklat	ကျိုက်လတ်Kyaikmaraw	ကျိုက်မရောKyaikto	ကျိုက်ထိုKyainseikgyi	ကြာအင်းဆိပ်ကြီးKyangin	ကြံခင်းKyaukkyi	ကျောက်ကြီးKyaukme	ကျောက်မဲKyaukpadaung	ကျောက်ပန်းတောင်းKyaukpyu	ကျောက်ဖြူKyaukse	ကျောက်ဆည်Kyauktada	ကျောက်တံတားKyauktaga	ကျောက်တံခါးKyauktan	ကျောက်တန်းKyauktaw	ကျောက်တော်Kyaunggon	ကျောင်းကုန်းKyeemyindaing	ကြည့်မြင်တိုင်Kyethi	ကျေးသီးKyonpyaw	ကျုံပျော်Kyunhla	ကျွန်းလှKyunsu	ကျွန်းစုLabutta	လပွတ္တာLahe	လဟယ်Laihka	လဲချားLangkho	လင်းခေးLanmadaw	လမ်းမတော်Lashio	လားရှိုးLatha	လသာLaukkaing	လောက်ကိုင်Launglon	လောင်းလုံLawksawk	ရပ်စောက်Lay Shi	လေရှီးLemyethna	လေးမျက်နှာLetpadan	လက်ပံတန်းLewe	လယ်ဝေးLoikaw	လွိုင်ကော်Loilen	လွိုင်လင်Mabein	မဘိမ်းMachanbaw	မချမ်းဘောMadaya	မတ္တရာMagway	မကွေးMahaaungmyay	မဟာအောင်မြေMahlaing	မလှိုင်Mansi	မံစီManton	မန်တုံMatman	မက်မန်းMatupi	မတူပီMaubin	မအူပင်Maungdaw	မောင်တောMawkmai	မောက်မယ်Mawlaik	မော်လိုက်Mawlamyine	မော်လမြိုင်Mawlamyinegyun	မော်လမြိုင်ကျွန်းMayangone	မရမ်းကုန်းMeiktila	မိတ္ထီလာMese	မယ်စဲ့Minbu	မင်းဘူးMinbya	မင်းပြားMindat	မင်းတပ်Mindon	မင်းတုန်းMingaladon	မင်္ဂလာဒုံMingalartaungnyunt	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်Mingin	မင်းကင်းMinhla	မင်းလှMinhla	မင်းလှMogaung	မိုးကောင်းMogoke	မိုးကုတ်Mohnyin	မိုးညှင်းMomauk	မိုးမောက်Monghpyak	မိုင်းဖြတ်Monghsat	မိုင်းဆတ်Monghsu	မိုင်းရှူးMongkaing	မိုင်းကိုင်Mongkhet	မိုင်းခတ်Mongla	မိုင်းလားMongmao	မိုင်းမောMongmit	မိုးမိတ်Mongnai	မိုးနဲMongpan	မိုင်းပန်Mongping	မိုင်းပျဥ်းMongton	မိုင်းတုံMongyai	မိုင်းရယ်Mongyang	မိုင်းယန်းMongyawng	မိုင်းယောင်းMonyo	မိုးညိုMonywa	မုံရွာMrauk-U	မြောက်ဦးMudon	မုဒုံMunaung	မာန်အောင်Muse	မူဆယ်Myaing	မြိုင်Myanaung	မြန်အောင်Myaung	မြောင်Myaungmya	မြောင်းမြMyawaddy	မြဝတီMyebon	မြေပုံMyeik	မြိတ်Myingyan	မြင်းခြံMyinmu	မြင်းမူMyitkyina	မြစ်ကြီးနားMyittha	မြစ်သားMyothit	မြို့သစ်Namhkan	နမ့်ခမ်းNamhsan	နမ့်ဆန်Namtu	နမ္မတူNansang	နမ့်စန်Nanyun	နန်းယွန်းNarphan	နားဖန်းNatmauk	နတ်မောက်Natogyi	နွားထိုးကြီးNattalin	နတ်တလင်းNawnghkio	နောင်ချိုNawngmun	နောင်မွန်းNgape	ငဖဲNgapudaw	ငပုတောNgazun	ငါန်းဇွန်North Okkalapa	မြောက်ဥက္ကလာပNyaung-U	ညောင်ဦးNyaungdon	ညောင်တုန်းNyaunglebin	ညောင်လေးပင်Nyaungshwe	ညောင်ရွှေOke Ta Ra Thi Ri	ဥတ္တရသီရိOkpho	အုတ်ဖိုOktwin	အုတ်တွင်းPabedan	ပန်းဘဲတန်းPadaung	ပန်းတောင်းPakokku	ပခုက္ကူPalaw	ပုလောPale	ပုလဲPaletwa	ပလက်ဝPangsang	ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)Pangwaun	ပန်ဝိုင်Pantanaw	ပန်းတနော်Pathein	ပုသိမ်Patheingyi	ပုသိမ်ကြီးPauk	ပေါက်Paukkhaung	ပေါက်ခေါင်းPauktaw	ပေါက်တောPaung	ပေါင်Paungbyin	ဖောင်းပြင်Paungde	ပေါင်းတည်Pazundaung	ပုဇွန်တောင်Pekon	ဖယ်ခုံPhyu	ဖြူးPindaya	ပင်းတယPinlaung	ပင်လောင်းPinlebu	ပင်လည်ဘူးPoke Ba Thi Ri	ပုဗ္ဗသီရိPonnagyun	ပုဏ္ဏားကျွန်းPuta-O	ပူတာအိုPwintbyu	ပွင့်ဖြူPyapon	ဖျာပုံPyawbwe	ပျော်ဘွယ်Pyay	ပြည်Pyigyitagon	ပြည်ကြီးတံခွန်Pyinmana	ပျဉ်းမနားPyinoolwin	ပြင်ဦးလွင်Ramree	ရမ်းဗြဲRathedaung	ရသေ့တောင်Sagaing	စစ်ကိုင်းSalin	စလင်းSalingyi	ဆားလင်းကြီးSanchaung	စမ်းချောင်းSaw	ဆောSeikgyikanaungto	ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုSeikkan	ဆိပ်ကမ်းSeikphyu	ဆိပ်ဖြူShadaw	ရှားတောShwebo	ရွှေဘိုShwedaung	ရွှေတောင်Shwegu	ရွှေကူShwegyin	ရွှေကျင်Shwepyithar	ရွှေပြည်သာSidoktaya	စေတုတ္တရာSinbaungwe	ဆင်ပေါင်ဝဲSingu	စဥ့်ကူးSintgaing	စဉ့်ကိုင်Sittwe	စစ်တွေSouth Okkalapa	တောင်ဥက္ကလာပSumprabum	ဆွမ်ပရာဘွမ်Tabayin	ဒီပဲယင်းTachileik	တာချီလိတ်Tada-U	တံတားဦးTaikkyi	တိုက်ကြီးTamu	တမူးTamwe	တာမွေTanai	တနိုင်းTangyan	တန့်ယန်းTanintharyi	တနင်္သာရီTatkon	တပ်ကုန်းTaungdwingyi	တောင်တွင်းကြီးTaunggyi	တောင်ကြီးTaungoo	တောင်ငူTaungtha	တောင်သာTaze	တန့်ဆည်Tedim	တီးတိန်Thabaung	သာပေါင်းThabeikkyin	သပိတ်ကျင်းThaketa	သာကေတThanatpin	သနပ်ပင်Thanbyuzayat	သံဖြူဇရပ်Thandaunggyi	သံတောင်ကြီးThandwe	သံတွဲThanlyin	သန်လျင်Thantlang	ထန်တလန်Thaton	သထုံThayarwady	သာယာဝတီThayet	သရက်Thayetchaung	သရက်ချောင်းThazi	သာစည်Thegon	သဲကုန်းThingangyun	သင်္ဃန်းကျွန်းThongwa	သုံးခွTigyaing	ထီးချိုင့်Tilin	ထီးလင်းTonzang	တွန်းဇံToungup	တောင်ကုတ်Tsawlaw	ဆော့လော်Twantay	တွံတေးWaingmaw	ဝိုင်းမော်Wakema	ဝါးခယ်မWaw	ဝေါWetlet	ဝက်လက်Wundwin	ဝမ်းတွင်းWuntho	ဝန်းသိုYamethin	ရမည်းသင်းYankin	ရန်ကင်းYe	ရေးYe-U	ရေဦးYebyu	ရေဖြူYedashe	ရေတာရှည်Yegyi	ရေကြည်Yenangyaung	ရေနံချောင်းYesagyo	ရေစကြိုYinmarbin	ယင်းမာပင်Ywangan	ရွာငံZa Bu Thi Ri	ဇမ္ဗူသီရိZalun	ဇလွန်Zay Yar Thi Ri	ဇေယျာသီရိZigon	ဇီးကုန်း
(Family Member 4) Permanent Address အမြဲတမ်းနေသော နေရပ်လိပ်စာ
(Family Member 5) Full name အမည်အပြည့်အစုံ
(Family Member 5) Gender ကျား/မ ရွေးပေးပါ
(Family Member 5) NRC number or Passport နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/နိုင်ငံကူးမှတ်ပုံတင်အမှတ်ကိုဖော်ပြပေးပ
(Family Member 5) Father's Name ဖခင်နာမည်အပြည့်အစုံကိုရေးပေးပါ
(Family Member 5) Birth Date မွေးနေ့၊ မွေးလ၊ မွေးနှစ် ကိုဖော်ပြပေးပါ။ DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / MM123456789101112 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
(Family Member 5) Phone Number ဖုန်းနံပါတ်
(Family Member 5) State / Division ပြည်နယ်/ တိုင်း Ayeyarwady	ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးBago (East)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)Bago (West)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)Chin	ချင်းပြည်နယ်Kachin	ကချင်ပြည်နယ်Kayah	ကယားပြည်နယ်Kayin	ကရင်ပြည်နယ်Magway	မကွေးတိုင်းဒေသကြီးMandalay	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးMon	မွန်ပြည်နယ်Nay Pyi Taw	နေပြည်တော်Rakhine	ရခိုင်ပြည်နယ်Sagaing	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးShan (East)	ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့)Shan (North)	ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်)Shan (South)	ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)Tanintharyi	တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးYangon	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(Family Member 5) Township မြို့နယ် Ahlone	အလုံAmarapura	အမရပူရAnn	အမ်းAunglan	အောင်လံAungmyaythazan	အောင်မြေသာစံAyadaw	အရာတော်Bago	ပဲခူးBahan	ဗဟန်းBanmauk	ဗန်းမောက်Bawlakhe	ဘောလခဲBhamo	ဗန်းမော်Bilin	ဘီးလင်းBogale	ဘိုကလေးBokpyin	ဘုတ်ပြင်းBotahtaung	ဗိုလ်တထောင်Budalin	ဘုတလင်Buthidaung	ဘူးသီးတောင်Chanayethazan	ချမ်းအေးသာစံChanmyathazi	ချမ်းမြသာစည်Chauk	ချောက်Chaung-U	ချောင်းဦးChaungzon	ချောင်းဆုံChipwi	ချီဖွေCocokyun	ကိုကိုးကျွန်းDagon	ဒဂုံDagon Myothit (East)	ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)Dagon Myothit (North)	ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)Dagon Myothit (Seikkan)	ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)Dagon Myothit (South)	ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)Daik-U	ဒိုက်ဦးDala	ဒလDanubyu	ဓနုဖြူDawbon	ဒေါပုံDawei	ထားဝယ်Dedaye	ဒေးဒရဲDemoso	ဒီမောဆိုDet Khi Na Thi Ri	ဒက္ခိဏသီရိEinme	အိမ်မဲFalam	ဖလမ်းGangaw	ဂန့်ဂေါGwa	ဂွGyobingauk	ကြို့ပင်ကောက်Hakha	ဟားခါးHinthada	ဟင်္သာတHkamti	ခန္တီးHlaing	လှိုင်Hlaingbwe	လှိုင်းဘွဲ့Hlaingtharya	လှိုင်သာယာHlegu	လှည်းကူးHmawbi	မှော်ဘီHomalin	ဟုမ္မလင်းHopang	ဟိုပန်Hopong	ဟိုပုန်းHpa-An	ဘားအံHpakant	ဖားကန့်Hpapun	ဖာပွန်Hpasawng	ဖားဆောင်းHpruso	ဖရူဆိုHseni	သိန္နီHsihseng	ဆီဆိုင်Hsipaw	သီပေါHtantabin	ထန်းတပင်Htantabin	ထန်းတပင်Indaw	အင်းတော်Ingapu	အင်္ဂပူInjangyang	အင်ဂျန်းယန်Insein	အင်းစိန်Kalaw	ကလောKale	ကလေးKalewa	ကလေးဝKamaryut	ကမာရွတ်Kamma	ကံမKanbalu	ကန့်ဘလူKangyidaunt	ကန်ကြီးထောင့်Kani	ကနီKanpetlet	ကန်ပက်လက်Katha	ကသာKawa	ကဝKawhmu	ကော့မှူးKawkareik	ကော့ကရိတ်Kawlin	ကောလင်းKawthoung	ကော့သောင်းKayan	ခရမ်းKengtung	ကျိုင်းတုံKhaunglanhpu	ခေါင်လန်ဖူးKhin-U	ခင်ဦးKonkyan	ကုန်းကြမ်းKungyangon	ကွမ်းခြံကုန်းKunhing	ကွန်ဟိန်းKunlong	ကွမ်းလုံKutkai	ကွတ်ခိုင်Kyaiklat	ကျိုက်လတ်Kyaikmaraw	ကျိုက်မရောKyaikto	ကျိုက်ထိုKyainseikgyi	ကြာအင်းဆိပ်ကြီးKyangin	ကြံခင်းKyaukkyi	ကျောက်ကြီးKyaukme	ကျောက်မဲKyaukpadaung	ကျောက်ပန်းတောင်းKyaukpyu	ကျောက်ဖြူKyaukse	ကျောက်ဆည်Kyauktada	ကျောက်တံတားKyauktaga	ကျောက်တံခါးKyauktan	ကျောက်တန်းKyauktaw	ကျောက်တော်Kyaunggon	ကျောင်းကုန်းKyeemyindaing	ကြည့်မြင်တိုင်Kyethi	ကျေးသီးKyonpyaw	ကျုံပျော်Kyunhla	ကျွန်းလှKyunsu	ကျွန်းစုLabutta	လပွတ္တာLahe	လဟယ်Laihka	လဲချားLangkho	လင်းခေးLanmadaw	လမ်းမတော်Lashio	လားရှိုးLatha	လသာLaukkaing	လောက်ကိုင်Launglon	လောင်းလုံLawksawk	ရပ်စောက်Lay Shi	လေရှီးLemyethna	လေးမျက်နှာLetpadan	လက်ပံတန်းLewe	လယ်ဝေးLoikaw	လွိုင်ကော်Loilen	လွိုင်လင်Mabein	မဘိမ်းMachanbaw	မချမ်းဘောMadaya	မတ္တရာMagway	မကွေးMahaaungmyay	မဟာအောင်မြေMahlaing	မလှိုင်Mansi	မံစီManton	မန်တုံMatman	မက်မန်းMatupi	မတူပီMaubin	မအူပင်Maungdaw	မောင်တောMawkmai	မောက်မယ်Mawlaik	မော်လိုက်Mawlamyine	မော်လမြိုင်Mawlamyinegyun	မော်လမြိုင်ကျွန်းMayangone	မရမ်းကုန်းMeiktila	မိတ္ထီလာMese	မယ်စဲ့Minbu	မင်းဘူးMinbya	မင်းပြားMindat	မင်းတပ်Mindon	မင်းတုန်းMingaladon	မင်္ဂလာဒုံMingalartaungnyunt	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်Mingin	မင်းကင်းMinhla	မင်းလှMinhla	မင်းလှMogaung	မိုးကောင်းMogoke	မိုးကုတ်Mohnyin	မိုးညှင်းMomauk	မိုးမောက်Monghpyak	မိုင်းဖြတ်Monghsat	မိုင်းဆတ်Monghsu	မိုင်းရှူးMongkaing	မိုင်းကိုင်Mongkhet	မိုင်းခတ်Mongla	မိုင်းလားMongmao	မိုင်းမောMongmit	မိုးမိတ်Mongnai	မိုးနဲMongpan	မိုင်းပန်Mongping	မိုင်းပျဥ်းMongton	မိုင်းတုံMongyai	မိုင်းရယ်Mongyang	မိုင်းယန်းMongyawng	မိုင်းယောင်းMonyo	မိုးညိုMonywa	မုံရွာMrauk-U	မြောက်ဦးMudon	မုဒုံMunaung	မာန်အောင်Muse	မူဆယ်Myaing	မြိုင်Myanaung	မြန်အောင်Myaung	မြောင်Myaungmya	မြောင်းမြMyawaddy	မြဝတီMyebon	မြေပုံMyeik	မြိတ်Myingyan	မြင်းခြံMyinmu	မြင်းမူMyitkyina	မြစ်ကြီးနားMyittha	မြစ်သားMyothit	မြို့သစ်Namhkan	နမ့်ခမ်းNamhsan	နမ့်ဆန်Namtu	နမ္မတူNansang	နမ့်စန်Nanyun	နန်းယွန်းNarphan	နားဖန်းNatmauk	နတ်မောက်Natogyi	နွားထိုးကြီးNattalin	နတ်တလင်းNawnghkio	နောင်ချိုNawngmun	နောင်မွန်းNgape	ငဖဲNgapudaw	ငပုတောNgazun	ငါန်းဇွန်North Okkalapa	မြောက်ဥက္ကလာပNyaung-U	ညောင်ဦးNyaungdon	ညောင်တုန်းNyaunglebin	ညောင်လေးပင်Nyaungshwe	ညောင်ရွှေOke Ta Ra Thi Ri	ဥတ္တရသီရိOkpho	အုတ်ဖိုOktwin	အုတ်တွင်းPabedan	ပန်းဘဲတန်းPadaung	ပန်းတောင်းPakokku	ပခုက္ကူPalaw	ပုလောPale	ပုလဲPaletwa	ပလက်ဝPangsang	ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)Pangwaun	ပန်ဝိုင်Pantanaw	ပန်းတနော်Pathein	ပုသိမ်Patheingyi	ပုသိမ်ကြီးPauk	ပေါက်Paukkhaung	ပေါက်ခေါင်းPauktaw	ပေါက်တောPaung	ပေါင်Paungbyin	ဖောင်းပြင်Paungde	ပေါင်းတည်Pazundaung	ပုဇွန်တောင်Pekon	ဖယ်ခုံPhyu	ဖြူးPindaya	ပင်းတယPinlaung	ပင်လောင်းPinlebu	ပင်လည်ဘူးPoke Ba Thi Ri	ပုဗ္ဗသီရိPonnagyun	ပုဏ္ဏားကျွန်းPuta-O	ပူတာအိုPwintbyu	ပွင့်ဖြူPyapon	ဖျာပုံPyawbwe	ပျော်ဘွယ်Pyay	ပြည်Pyigyitagon	ပြည်ကြီးတံခွန်Pyinmana	ပျဉ်းမနားPyinoolwin	ပြင်ဦးလွင်Ramree	ရမ်းဗြဲRathedaung	ရသေ့တောင်Sagaing	စစ်ကိုင်းSalin	စလင်းSalingyi	ဆားလင်းကြီးSanchaung	စမ်းချောင်းSaw	ဆောSeikgyikanaungto	ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုSeikkan	ဆိပ်ကမ်းSeikphyu	ဆိပ်ဖြူShadaw	ရှားတောShwebo	ရွှေဘိုShwedaung	ရွှေတောင်Shwegu	ရွှေကူShwegyin	ရွှေကျင်Shwepyithar	ရွှေပြည်သာSidoktaya	စေတုတ္တရာSinbaungwe	ဆင်ပေါင်ဝဲSingu	စဥ့်ကူးSintgaing	စဉ့်ကိုင်Sittwe	စစ်တွေSouth Okkalapa	တောင်ဥက္ကလာပSumprabum	ဆွမ်ပရာဘွမ်Tabayin	ဒီပဲယင်းTachileik	တာချီလိတ်Tada-U	တံတားဦးTaikkyi	တိုက်ကြီးTamu	တမူးTamwe	တာမွေTanai	တနိုင်းTangyan	တန့်ယန်းTanintharyi	တနင်္သာရီTatkon	တပ်ကုန်းTaungdwingyi	တောင်တွင်းကြီးTaunggyi	တောင်ကြီးTaungoo	တောင်ငူTaungtha	တောင်သာTaze	တန့်ဆည်Tedim	တီးတိန်Thabaung	သာပေါင်းThabeikkyin	သပိတ်ကျင်းThaketa	သာကေတThanatpin	သနပ်ပင်Thanbyuzayat	သံဖြူဇရပ်Thandaunggyi	သံတောင်ကြီးThandwe	သံတွဲThanlyin	သန်လျင်Thantlang	ထန်တလန်Thaton	သထုံThayarwady	သာယာဝတီThayet	သရက်Thayetchaung	သရက်ချောင်းThazi	သာစည်Thegon	သဲကုန်းThingangyun	သင်္ဃန်းကျွန်းThongwa	သုံးခွTigyaing	ထီးချိုင့်Tilin	ထီးလင်းTonzang	တွန်းဇံToungup	တောင်ကုတ်Tsawlaw	ဆော့လော်Twantay	တွံတေးWaingmaw	ဝိုင်းမော်Wakema	ဝါးခယ်မWaw	ဝေါWetlet	ဝက်လက်Wundwin	ဝမ်းတွင်းWuntho	ဝန်းသိုYamethin	ရမည်းသင်းYankin	ရန်ကင်းYe	ရေးYe-U	ရေဦးYebyu	ရေဖြူYedashe	ရေတာရှည်Yegyi	ရေကြည်Yenangyaung	ရေနံချောင်းYesagyo	ရေစကြိုYinmarbin	ယင်းမာပင်Ywangan	ရွာငံZa Bu Thi Ri	ဇမ္ဗူသီရိZalun	ဇလွန်Zay Yar Thi Ri	ဇေယျာသီရိZigon	ဇီးကုန်း
(Family Member 5) Permanent Address အမြဲတမ်းနေသော နေရပ်လိပ်စာ
(Family Member 6) Full name အမည်အပြည့်အစုံ
(Family Member 6) Gender ကျား/မ ရွေးပေးပါ
(Family Member 6) NRC number or Passport နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/နိုင်ငံကူးမှတ်ပုံတင်အမှတ်ကိုဖော်ပြပေးပ
(Family Member 6) Father's Name ဖခင်နာမည်အပြည့်အစုံကိုရေးပေးပါ
(Family Member 6) Birth Date မွေးနေ့၊ မွေးလ၊ မွေးနှစ် ကိုဖော်ပြပေးပါ။ DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / MM123456789101112 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
(Family Member 6) Phone Number ဖုန်းနံပါတ်
(Family Member 6) State / Division ပြည်နယ်/ တိုင်း Ayeyarwady	ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးBago (East)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)Bago (West)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)Chin	ချင်းပြည်နယ်Kachin	ကချင်ပြည်နယ်Kayah	ကယားပြည်နယ်Kayin	ကရင်ပြည်နယ်Magway	မကွေးတိုင်းဒေသကြီးMandalay	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးMon	မွန်ပြည်နယ်Nay Pyi Taw	နေပြည်တော်Rakhine	ရခိုင်ပြည်နယ်Sagaing	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးShan (East)	ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့)Shan (North)	ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်)Shan (South)	ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)Tanintharyi	တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးYangon	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(Family Member 6) Township မြို့နယ် Ahlone	အလုံAmarapura	အမရပူရAnn	အမ်းAunglan	အောင်လံAungmyaythazan	အောင်မြေသာစံAyadaw	အရာတော်Bago	ပဲခူးBahan	ဗဟန်းBanmauk	ဗန်းမောက်Bawlakhe	ဘောလခဲBhamo	ဗန်းမော်Bilin	ဘီးလင်းBogale	ဘိုကလေးBokpyin	ဘုတ်ပြင်းBotahtaung	ဗိုလ်တထောင်Budalin	ဘုတလင်Buthidaung	ဘူးသီးတောင်Chanayethazan	ချမ်းအေးသာစံChanmyathazi	ချမ်းမြသာစည်Chauk	ချောက်Chaung-U	ချောင်းဦးChaungzon	ချောင်းဆုံChipwi	ချီဖွေCocokyun	ကိုကိုးကျွန်းDagon	ဒဂုံDagon Myothit (East)	ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)Dagon Myothit (North)	ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)Dagon Myothit (Seikkan)	ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)Dagon Myothit (South)	ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)Daik-U	ဒိုက်ဦးDala	ဒလDanubyu	ဓနုဖြူDawbon	ဒေါပုံDawei	ထားဝယ်Dedaye	ဒေးဒရဲDemoso	ဒီမောဆိုDet Khi Na Thi Ri	ဒက္ခိဏသီရိEinme	အိမ်မဲFalam	ဖလမ်းGangaw	ဂန့်ဂေါGwa	ဂွGyobingauk	ကြို့ပင်ကောက်Hakha	ဟားခါးHinthada	ဟင်္သာတHkamti	ခန္တီးHlaing	လှိုင်Hlaingbwe	လှိုင်းဘွဲ့Hlaingtharya	လှိုင်သာယာHlegu	လှည်းကူးHmawbi	မှော်ဘီHomalin	ဟုမ္မလင်းHopang	ဟိုပန်Hopong	ဟိုပုန်းHpa-An	ဘားအံHpakant	ဖားကန့်Hpapun	ဖာပွန်Hpasawng	ဖားဆောင်းHpruso	ဖရူဆိုHseni	သိန္နီHsihseng	ဆီဆိုင်Hsipaw	သီပေါHtantabin	ထန်းတပင်Htantabin	ထန်းတပင်Indaw	အင်းတော်Ingapu	အင်္ဂပူInjangyang	အင်ဂျန်းယန်Insein	အင်းစိန်Kalaw	ကလောKale	ကလေးKalewa	ကလေးဝKamaryut	ကမာရွတ်Kamma	ကံမKanbalu	ကန့်ဘလူKangyidaunt	ကန်ကြီးထောင့်Kani	ကနီKanpetlet	ကန်ပက်လက်Katha	ကသာKawa	ကဝKawhmu	ကော့မှူးKawkareik	ကော့ကရိတ်Kawlin	ကောလင်းKawthoung	ကော့သောင်းKayan	ခရမ်းKengtung	ကျိုင်းတုံKhaunglanhpu	ခေါင်လန်ဖူးKhin-U	ခင်ဦးKonkyan	ကုန်းကြမ်းKungyangon	ကွမ်းခြံကုန်းKunhing	ကွန်ဟိန်းKunlong	ကွမ်းလုံKutkai	ကွတ်ခိုင်Kyaiklat	ကျိုက်လတ်Kyaikmaraw	ကျိုက်မရောKyaikto	ကျိုက်ထိုKyainseikgyi	ကြာအင်းဆိပ်ကြီးKyangin	ကြံခင်းKyaukkyi	ကျောက်ကြီးKyaukme	ကျောက်မဲKyaukpadaung	ကျောက်ပန်းတောင်းKyaukpyu	ကျောက်ဖြူKyaukse	ကျောက်ဆည်Kyauktada	ကျောက်တံတားKyauktaga	ကျောက်တံခါးKyauktan	ကျောက်တန်းKyauktaw	ကျောက်တော်Kyaunggon	ကျောင်းကုန်းKyeemyindaing	ကြည့်မြင်တိုင်Kyethi	ကျေးသီးKyonpyaw	ကျုံပျော်Kyunhla	ကျွန်းလှKyunsu	ကျွန်းစုLabutta	လပွတ္တာLahe	လဟယ်Laihka	လဲချားLangkho	လင်းခေးLanmadaw	လမ်းမတော်Lashio	လားရှိုးLatha	လသာLaukkaing	လောက်ကိုင်Launglon	လောင်းလုံLawksawk	ရပ်စောက်Lay Shi	လေရှီးLemyethna	လေးမျက်နှာLetpadan	လက်ပံတန်းLewe	လယ်ဝေးLoikaw	လွိုင်ကော်Loilen	လွိုင်လင်Mabein	မဘိမ်းMachanbaw	မချမ်းဘောMadaya	မတ္တရာMagway	မကွေးMahaaungmyay	မဟာအောင်မြေMahlaing	မလှိုင်Mansi	မံစီManton	မန်တုံMatman	မက်မန်းMatupi	မတူပီMaubin	မအူပင်Maungdaw	မောင်တောMawkmai	မောက်မယ်Mawlaik	မော်လိုက်Mawlamyine	မော်လမြိုင်Mawlamyinegyun	မော်လမြိုင်ကျွန်းMayangone	မရမ်းကုန်းMeiktila	မိတ္ထီလာMese	မယ်စဲ့Minbu	မင်းဘူးMinbya	မင်းပြားMindat	မင်းတပ်Mindon	မင်းတုန်းMingaladon	မင်္ဂလာဒုံMingalartaungnyunt	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်Mingin	မင်းကင်းMinhla	မင်းလှMinhla	မင်းလှMogaung	မိုးကောင်းMogoke	မိုးကုတ်Mohnyin	မိုးညှင်းMomauk	မိုးမောက်Monghpyak	မိုင်းဖြတ်Monghsat	မိုင်းဆတ်Monghsu	မိုင်းရှူးMongkaing	မိုင်းကိုင်Mongkhet	မိုင်းခတ်Mongla	မိုင်းလားMongmao	မိုင်းမောMongmit	မိုးမိတ်Mongnai	မိုးနဲMongpan	မိုင်းပန်Mongping	မိုင်းပျဥ်းMongton	မိုင်းတုံMongyai	မိုင်းရယ်Mongyang	မိုင်းယန်းMongyawng	မိုင်းယောင်းMonyo	မိုးညိုMonywa	မုံရွာMrauk-U	မြောက်ဦးMudon	မုဒုံMunaung	မာန်အောင်Muse	မူဆယ်Myaing	မြိုင်Myanaung	မြန်အောင်Myaung	မြောင်Myaungmya	မြောင်းမြMyawaddy	မြဝတီMyebon	မြေပုံMyeik	မြိတ်Myingyan	မြင်းခြံMyinmu	မြင်းမူMyitkyina	မြစ်ကြီးနားMyittha	မြစ်သားMyothit	မြို့သစ်Namhkan	နမ့်ခမ်းNamhsan	နမ့်ဆန်Namtu	နမ္မတူNansang	နမ့်စန်Nanyun	နန်းယွန်းNarphan	နားဖန်းNatmauk	နတ်မောက်Natogyi	နွားထိုးကြီးNattalin	နတ်တလင်းNawnghkio	နောင်ချိုNawngmun	နောင်မွန်းNgape	ငဖဲNgapudaw	ငပုတောNgazun	ငါန်းဇွန်North Okkalapa	မြောက်ဥက္ကလာပNyaung-U	ညောင်ဦးNyaungdon	ညောင်တုန်းNyaunglebin	ညောင်လေးပင်Nyaungshwe	ညောင်ရွှေOke Ta Ra Thi Ri	ဥတ္တရသီရိOkpho	အုတ်ဖိုOktwin	အုတ်တွင်းPabedan	ပန်းဘဲတန်းPadaung	ပန်းတောင်းPakokku	ပခုက္ကူPalaw	ပုလောPale	ပုလဲPaletwa	ပလက်ဝPangsang	ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)Pangwaun	ပန်ဝိုင်Pantanaw	ပန်းတနော်Pathein	ပုသိမ်Patheingyi	ပုသိမ်ကြီးPauk	ပေါက်Paukkhaung	ပေါက်ခေါင်းPauktaw	ပေါက်တောPaung	ပေါင်Paungbyin	ဖောင်းပြင်Paungde	ပေါင်းတည်Pazundaung	ပုဇွန်တောင်Pekon	ဖယ်ခုံPhyu	ဖြူးPindaya	ပင်းတယPinlaung	ပင်လောင်းPinlebu	ပင်လည်ဘူးPoke Ba Thi Ri	ပုဗ္ဗသီရိPonnagyun	ပုဏ္ဏားကျွန်းPuta-O	ပူတာအိုPwintbyu	ပွင့်ဖြူPyapon	ဖျာပုံPyawbwe	ပျော်ဘွယ်Pyay	ပြည်Pyigyitagon	ပြည်ကြီးတံခွန်Pyinmana	ပျဉ်းမနားPyinoolwin	ပြင်ဦးလွင်Ramree	ရမ်းဗြဲRathedaung	ရသေ့တောင်Sagaing	စစ်ကိုင်းSalin	စလင်းSalingyi	ဆားလင်းကြီးSanchaung	စမ်းချောင်းSaw	ဆောSeikgyikanaungto	ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုSeikkan	ဆိပ်ကမ်းSeikphyu	ဆိပ်ဖြူShadaw	ရှားတောShwebo	ရွှေဘိုShwedaung	ရွှေတောင်Shwegu	ရွှေကူShwegyin	ရွှေကျင်Shwepyithar	ရွှေပြည်သာSidoktaya	စေတုတ္တရာSinbaungwe	ဆင်ပေါင်ဝဲSingu	စဥ့်ကူးSintgaing	စဉ့်ကိုင်Sittwe	စစ်တွေSouth Okkalapa	တောင်ဥက္ကလာပSumprabum	ဆွမ်ပရာဘွမ်Tabayin	ဒီပဲယင်းTachileik	တာချီလိတ်Tada-U	တံတားဦးTaikkyi	တိုက်ကြီးTamu	တမူးTamwe	တာမွေTanai	တနိုင်းTangyan	တန့်ယန်းTanintharyi	တနင်္သာရီTatkon	တပ်ကုန်းTaungdwingyi	တောင်တွင်းကြီးTaunggyi	တောင်ကြီးTaungoo	တောင်ငူTaungtha	တောင်သာTaze	တန့်ဆည်Tedim	တီးတိန်Thabaung	သာပေါင်းThabeikkyin	သပိတ်ကျင်းThaketa	သာကေတThanatpin	သနပ်ပင်Thanbyuzayat	သံဖြူဇရပ်Thandaunggyi	သံတောင်ကြီးThandwe	သံတွဲThanlyin	သန်လျင်Thantlang	ထန်တလန်Thaton	သထုံThayarwady	သာယာဝတီThayet	သရက်Thayetchaung	သရက်ချောင်းThazi	သာစည်Thegon	သဲကုန်းThingangyun	သင်္ဃန်းကျွန်းThongwa	သုံးခွTigyaing	ထီးချိုင့်Tilin	ထီးလင်းTonzang	တွန်းဇံToungup	တောင်ကုတ်Tsawlaw	ဆော့လော်Twantay	တွံတေးWaingmaw	ဝိုင်းမော်Wakema	ဝါးခယ်မWaw	ဝေါWetlet	ဝက်လက်Wundwin	ဝမ်းတွင်းWuntho	ဝန်းသိုYamethin	ရမည်းသင်းYankin	ရန်ကင်းYe	ရေးYe-U	ရေဦးYebyu	ရေဖြူYedashe	ရေတာရှည်Yegyi	ရေကြည်Yenangyaung	ရေနံချောင်းYesagyo	ရေစကြိုYinmarbin	ယင်းမာပင်Ywangan	ရွာငံZa Bu Thi Ri	ဇမ္ဗူသီရိZalun	ဇလွန်Zay Yar Thi Ri	ဇေယျာသီရိZigon	ဇီးကုန်း
(Family Member 6) Permanent Address အမြဲတမ်းနေသော နေရပ်လိပ်စာ
(Family Member 7) Full name အမည်အပြည့်အစုံ
(Family Member 7) Gender ကျား/မ ရွေးပေးပါ
(Family Member 7) NRC number or Passport နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/နိုင်ငံကူးမှတ်ပုံတင်အမှတ်ကိုဖော်ပြပေးပ
(Family Member 7) Father's Name ဖခင်နာမည်အပြည့်အစုံကိုရေးပေးပါ
(Family Member 7) Birth Date မွေးနေ့၊ မွေးလ၊ မွေးနှစ် ကိုဖော်ပြပေးပါ။ DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / MM123456789101112 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
(Family Member 7) Phone Number ဖုန်းနံပါတ်
(Family Member 7) State / Division ပြည်နယ်/ တိုင်း Ayeyarwady	ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးBago (East)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)Bago (West)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)Chin	ချင်းပြည်နယ်Kachin	ကချင်ပြည်နယ်Kayah	ကယားပြည်နယ်Kayin	ကရင်ပြည်နယ်Magway	မကွေးတိုင်းဒေသကြီးMandalay	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးMon	မွန်ပြည်နယ်Nay Pyi Taw	နေပြည်တော်Rakhine	ရခိုင်ပြည်နယ်Sagaing	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးShan (East)	ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့)Shan (North)	ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်)Shan (South)	ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)Tanintharyi	တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးYangon	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(Family Member 7) Township မြို့နယ် Ahlone	အလုံAmarapura	အမရပူရAnn	အမ်းAunglan	အောင်လံAungmyaythazan	အောင်မြေသာစံAyadaw	အရာတော်Bago	ပဲခူးBahan	ဗဟန်းBanmauk	ဗန်းမောက်Bawlakhe	ဘောလခဲBhamo	ဗန်းမော်Bilin	ဘီးလင်းBogale	ဘိုကလေးBokpyin	ဘုတ်ပြင်းBotahtaung	ဗိုလ်တထောင်Budalin	ဘုတလင်Buthidaung	ဘူးသီးတောင်Chanayethazan	ချမ်းအေးသာစံChanmyathazi	ချမ်းမြသာစည်Chauk	ချောက်Chaung-U	ချောင်းဦးChaungzon	ချောင်းဆုံChipwi	ချီဖွေCocokyun	ကိုကိုးကျွန်းDagon	ဒဂုံDagon Myothit (East)	ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)Dagon Myothit (North)	ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)Dagon Myothit (Seikkan)	ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)Dagon Myothit (South)	ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)Daik-U	ဒိုက်ဦးDala	ဒလDanubyu	ဓနုဖြူDawbon	ဒေါပုံDawei	ထားဝယ်Dedaye	ဒေးဒရဲDemoso	ဒီမောဆိုDet Khi Na Thi Ri	ဒက္ခိဏသီရိEinme	အိမ်မဲFalam	ဖလမ်းGangaw	ဂန့်ဂေါGwa	ဂွGyobingauk	ကြို့ပင်ကောက်Hakha	ဟားခါးHinthada	ဟင်္သာတHkamti	ခန္တီးHlaing	လှိုင်Hlaingbwe	လှိုင်းဘွဲ့Hlaingtharya	လှိုင်သာယာHlegu	လှည်းကူးHmawbi	မှော်ဘီHomalin	ဟုမ္မလင်းHopang	ဟိုပန်Hopong	ဟိုပုန်းHpa-An	ဘားအံHpakant	ဖားကန့်Hpapun	ဖာပွန်Hpasawng	ဖားဆောင်းHpruso	ဖရူဆိုHseni	သိန္နီHsihseng	ဆီဆိုင်Hsipaw	သီပေါHtantabin	ထန်းတပင်Htantabin	ထန်းတပင်Indaw	အင်းတော်Ingapu	အင်္ဂပူInjangyang	အင်ဂျန်းယန်Insein	အင်းစိန်Kalaw	ကလောKale	ကလေးKalewa	ကလေးဝKamaryut	ကမာရွတ်Kamma	ကံမKanbalu	ကန့်ဘလူKangyidaunt	ကန်ကြီးထောင့်Kani	ကနီKanpetlet	ကန်ပက်လက်Katha	ကသာKawa	ကဝKawhmu	ကော့မှူးKawkareik	ကော့ကရိတ်Kawlin	ကောလင်းKawthoung	ကော့သောင်းKayan	ခရမ်းKengtung	ကျိုင်းတုံKhaunglanhpu	ခေါင်လန်ဖူးKhin-U	ခင်ဦးKonkyan	ကုန်းကြမ်းKungyangon	ကွမ်းခြံကုန်းKunhing	ကွန်ဟိန်းKunlong	ကွမ်းလုံKutkai	ကွတ်ခိုင်Kyaiklat	ကျိုက်လတ်Kyaikmaraw	ကျိုက်မရောKyaikto	ကျိုက်ထိုKyainseikgyi	ကြာအင်းဆိပ်ကြီးKyangin	ကြံခင်းKyaukkyi	ကျောက်ကြီးKyaukme	ကျောက်မဲKyaukpadaung	ကျောက်ပန်းတောင်းKyaukpyu	ကျောက်ဖြူKyaukse	ကျောက်ဆည်Kyauktada	ကျောက်တံတားKyauktaga	ကျောက်တံခါးKyauktan	ကျောက်တန်းKyauktaw	ကျောက်တော်Kyaunggon	ကျောင်းကုန်းKyeemyindaing	ကြည့်မြင်တိုင်Kyethi	ကျေးသီးKyonpyaw	ကျုံပျော်Kyunhla	ကျွန်းလှKyunsu	ကျွန်းစုLabutta	လပွတ္တာLahe	လဟယ်Laihka	လဲချားLangkho	လင်းခေးLanmadaw	လမ်းမတော်Lashio	လားရှိုးLatha	လသာLaukkaing	လောက်ကိုင်Launglon	လောင်းလုံLawksawk	ရပ်စောက်Lay Shi	လေရှီးLemyethna	လေးမျက်နှာLetpadan	လက်ပံတန်းLewe	လယ်ဝေးLoikaw	လွိုင်ကော်Loilen	လွိုင်လင်Mabein	မဘိမ်းMachanbaw	မချမ်းဘောMadaya	မတ္တရာMagway	မကွေးMahaaungmyay	မဟာအောင်မြေMahlaing	မလှိုင်Mansi	မံစီManton	မန်တုံMatman	မက်မန်းMatupi	မတူပီMaubin	မအူပင်Maungdaw	မောင်တောMawkmai	မောက်မယ်Mawlaik	မော်လိုက်Mawlamyine	မော်လမြိုင်Mawlamyinegyun	မော်လမြိုင်ကျွန်းMayangone	မရမ်းကုန်းMeiktila	မိတ္ထီလာMese	မယ်စဲ့Minbu	မင်းဘူးMinbya	မင်းပြားMindat	မင်းတပ်Mindon	မင်းတုန်းMingaladon	မင်္ဂလာဒုံMingalartaungnyunt	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်Mingin	မင်းကင်းMinhla	မင်းလှMinhla	မင်းလှMogaung	မိုးကောင်းMogoke	မိုးကုတ်Mohnyin	မိုးညှင်းMomauk	မိုးမောက်Monghpyak	မိုင်းဖြတ်Monghsat	မိုင်းဆတ်Monghsu	မိုင်းရှူးMongkaing	မိုင်းကိုင်Mongkhet	မိုင်းခတ်Mongla	မိုင်းလားMongmao	မိုင်းမောMongmit	မိုးမိတ်Mongnai	မိုးနဲMongpan	မိုင်းပန်Mongping	မိုင်းပျဥ်းMongton	မိုင်းတုံMongyai	မိုင်းရယ်Mongyang	မိုင်းယန်းMongyawng	မိုင်းယောင်းMonyo	မိုးညိုMonywa	မုံရွာMrauk-U	မြောက်ဦးMudon	မုဒုံMunaung	မာန်အောင်Muse	မူဆယ်Myaing	မြိုင်Myanaung	မြန်အောင်Myaung	မြောင်Myaungmya	မြောင်းမြMyawaddy	မြဝတီMyebon	မြေပုံMyeik	မြိတ်Myingyan	မြင်းခြံMyinmu	မြင်းမူMyitkyina	မြစ်ကြီးနားMyittha	မြစ်သားMyothit	မြို့သစ်Namhkan	နမ့်ခမ်းNamhsan	နမ့်ဆန်Namtu	နမ္မတူNansang	နမ့်စန်Nanyun	နန်းယွန်းNarphan	နားဖန်းNatmauk	နတ်မောက်Natogyi	နွားထိုးကြီးNattalin	နတ်တလင်းNawnghkio	နောင်ချိုNawngmun	နောင်မွန်းNgape	ငဖဲNgapudaw	ငပုတောNgazun	ငါန်းဇွန်North Okkalapa	မြောက်ဥက္ကလာပNyaung-U	ညောင်ဦးNyaungdon	ညောင်တုန်းNyaunglebin	ညောင်လေးပင်Nyaungshwe	ညောင်ရွှေOke Ta Ra Thi Ri	ဥတ္တရသီရိOkpho	အုတ်ဖိုOktwin	အုတ်တွင်းPabedan	ပန်းဘဲတန်းPadaung	ပန်းတောင်းPakokku	ပခုက္ကူPalaw	ပုလောPale	ပုလဲPaletwa	ပလက်ဝPangsang	ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)Pangwaun	ပန်ဝိုင်Pantanaw	ပန်းတနော်Pathein	ပုသိမ်Patheingyi	ပုသိမ်ကြီးPauk	ပေါက်Paukkhaung	ပေါက်ခေါင်းPauktaw	ပေါက်တောPaung	ပေါင်Paungbyin	ဖောင်းပြင်Paungde	ပေါင်းတည်Pazundaung	ပုဇွန်တောင်Pekon	ဖယ်ခုံPhyu	ဖြူးPindaya	ပင်းတယPinlaung	ပင်လောင်းPinlebu	ပင်လည်ဘူးPoke Ba Thi Ri	ပုဗ္ဗသီရိPonnagyun	ပုဏ္ဏားကျွန်းPuta-O	ပူတာအိုPwintbyu	ပွင့်ဖြူPyapon	ဖျာပုံPyawbwe	ပျော်ဘွယ်Pyay	ပြည်Pyigyitagon	ပြည်ကြီးတံခွန်Pyinmana	ပျဉ်းမနားPyinoolwin	ပြင်ဦးလွင်Ramree	ရမ်းဗြဲRathedaung	ရသေ့တောင်Sagaing	စစ်ကိုင်းSalin	စလင်းSalingyi	ဆားလင်းကြီးSanchaung	စမ်းချောင်းSaw	ဆောSeikgyikanaungto	ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုSeikkan	ဆိပ်ကမ်းSeikphyu	ဆိပ်ဖြူShadaw	ရှားတောShwebo	ရွှေဘိုShwedaung	ရွှေတောင်Shwegu	ရွှေကူShwegyin	ရွှေကျင်Shwepyithar	ရွှေပြည်သာSidoktaya	စေတုတ္တရာSinbaungwe	ဆင်ပေါင်ဝဲSingu	စဥ့်ကူးSintgaing	စဉ့်ကိုင်Sittwe	စစ်တွေSouth Okkalapa	တောင်ဥက္ကလာပSumprabum	ဆွမ်ပရာဘွမ်Tabayin	ဒီပဲယင်းTachileik	တာချီလိတ်Tada-U	တံတားဦးTaikkyi	တိုက်ကြီးTamu	တမူးTamwe	တာမွေTanai	တနိုင်းTangyan	တန့်ယန်းTanintharyi	တနင်္သာရီTatkon	တပ်ကုန်းTaungdwingyi	တောင်တွင်းကြီးTaunggyi	တောင်ကြီးTaungoo	တောင်ငူTaungtha	တောင်သာTaze	တန့်ဆည်Tedim	တီးတိန်Thabaung	သာပေါင်းThabeikkyin	သပိတ်ကျင်းThaketa	သာကေတThanatpin	သနပ်ပင်Thanbyuzayat	သံဖြူဇရပ်Thandaunggyi	သံတောင်ကြီးThandwe	သံတွဲThanlyin	သန်လျင်Thantlang	ထန်တလန်Thaton	သထုံThayarwady	သာယာဝတီThayet	သရက်Thayetchaung	သရက်ချောင်းThazi	သာစည်Thegon	သဲကုန်းThingangyun	သင်္ဃန်းကျွန်းThongwa	သုံးခွTigyaing	ထီးချိုင့်Tilin	ထီးလင်းTonzang	တွန်းဇံToungup	တောင်ကုတ်Tsawlaw	ဆော့လော်Twantay	တွံတေးWaingmaw	ဝိုင်းမော်Wakema	ဝါးခယ်မWaw	ဝေါWetlet	ဝက်လက်Wundwin	ဝမ်းတွင်းWuntho	ဝန်းသိုYamethin	ရမည်းသင်းYankin	ရန်ကင်းYe	ရေးYe-U	ရေဦးYebyu	ရေဖြူYedashe	ရေတာရှည်Yegyi	ရေကြည်Yenangyaung	ရေနံချောင်းYesagyo	ရေစကြိုYinmarbin	ယင်းမာပင်Ywangan	ရွာငံZa Bu Thi Ri	ဇမ္ဗူသီရိZalun	ဇလွန်Zay Yar Thi Ri	ဇေယျာသီရိZigon	ဇီးကုန်း
(Family Member 7) Permanent Address အမြဲတမ်းနေသော နေရပ်လိပ်စာ
(Family Member 8) Full name အမည်အပြည့်အစုံ
(Family Member 8) Gender ကျား/မ ရွေးပေးပါ
(Family Member 8) NRC number or Passport နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/နိုင်ငံကူးမှတ်ပုံတင်အမှတ်ကိုဖော်ပြပေးပ
(Family Member 8) Father's Name ဖခင်နာမည်အပြည့်အစုံကိုရေးပေးပါ
(Family Member 8) Birth Date မွေးနေ့၊ မွေးလ၊ မွေးနှစ် ကိုဖော်ပြပေးပါ။ DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / MM123456789101112 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
(Family Member 8) Phone Number ဖုန်းနံပါတ်
(Family Member 8) State / Division ပြည်နယ်/ တိုင်း Ayeyarwady	ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးBago (East)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)Bago (West)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)Chin	ချင်းပြည်နယ်Kachin	ကချင်ပြည်နယ်Kayah	ကယားပြည်နယ်Kayin	ကရင်ပြည်နယ်Magway	မကွေးတိုင်းဒေသကြီးMandalay	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးMon	မွန်ပြည်နယ်Nay Pyi Taw	နေပြည်တော်Rakhine	ရခိုင်ပြည်နယ်Sagaing	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးShan (East)	ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့)Shan (North)	ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်)Shan (South)	ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)Tanintharyi	တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးYangon	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(Family Member 8) Township မြို့နယ် Ahlone	အလုံAmarapura	အမရပူရAnn	အမ်းAunglan	အောင်လံAungmyaythazan	အောင်မြေသာစံAyadaw	အရာတော်Bago	ပဲခူးBahan	ဗဟန်းBanmauk	ဗန်းမောက်Bawlakhe	ဘောလခဲBhamo	ဗန်းမော်Bilin	ဘီးလင်းBogale	ဘိုကလေးBokpyin	ဘုတ်ပြင်းBotahtaung	ဗိုလ်တထောင်Budalin	ဘုတလင်Buthidaung	ဘူးသီးတောင်Chanayethazan	ချမ်းအေးသာစံChanmyathazi	ချမ်းမြသာစည်Chauk	ချောက်Chaung-U	ချောင်းဦးChaungzon	ချောင်းဆုံChipwi	ချီဖွေCocokyun	ကိုကိုးကျွန်းDagon	ဒဂုံDagon Myothit (East)	ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)Dagon Myothit (North)	ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)Dagon Myothit (Seikkan)	ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)Dagon Myothit (South)	ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)Daik-U	ဒိုက်ဦးDala	ဒလDanubyu	ဓနုဖြူDawbon	ဒေါပုံDawei	ထားဝယ်Dedaye	ဒေးဒရဲDemoso	ဒီမောဆိုDet Khi Na Thi Ri	ဒက္ခိဏသီရိEinme	အိမ်မဲFalam	ဖလမ်းGangaw	ဂန့်ဂေါGwa	ဂွGyobingauk	ကြို့ပင်ကောက်Hakha	ဟားခါးHinthada	ဟင်္သာတHkamti	ခန္တီးHlaing	လှိုင်Hlaingbwe	လှိုင်းဘွဲ့Hlaingtharya	လှိုင်သာယာHlegu	လှည်းကူးHmawbi	မှော်ဘီHomalin	ဟုမ္မလင်းHopang	ဟိုပန်Hopong	ဟိုပုန်းHpa-An	ဘားအံHpakant	ဖားကန့်Hpapun	ဖာပွန်Hpasawng	ဖားဆောင်းHpruso	ဖရူဆိုHseni	သိန္နီHsihseng	ဆီဆိုင်Hsipaw	သီပေါHtantabin	ထန်းတပင်Htantabin	ထန်းတပင်Indaw	အင်းတော်Ingapu	အင်္ဂပူInjangyang	အင်ဂျန်းယန်Insein	အင်းစိန်Kalaw	ကလောKale	ကလေးKalewa	ကလေးဝKamaryut	ကမာရွတ်Kamma	ကံမKanbalu	ကန့်ဘလူKangyidaunt	ကန်ကြီးထောင့်Kani	ကနီKanpetlet	ကန်ပက်လက်Katha	ကသာKawa	ကဝKawhmu	ကော့မှူးKawkareik	ကော့ကရိတ်Kawlin	ကောလင်းKawthoung	ကော့သောင်းKayan	ခရမ်းKengtung	ကျိုင်းတုံKhaunglanhpu	ခေါင်လန်ဖူးKhin-U	ခင်ဦးKonkyan	ကုန်းကြမ်းKungyangon	ကွမ်းခြံကုန်းKunhing	ကွန်ဟိန်းKunlong	ကွမ်းလုံKutkai	ကွတ်ခိုင်Kyaiklat	ကျိုက်လတ်Kyaikmaraw	ကျိုက်မရောKyaikto	ကျိုက်ထိုKyainseikgyi	ကြာအင်းဆိပ်ကြီးKyangin	ကြံခင်းKyaukkyi	ကျောက်ကြီးKyaukme	ကျောက်မဲKyaukpadaung	ကျောက်ပန်းတောင်းKyaukpyu	ကျောက်ဖြူKyaukse	ကျောက်ဆည်Kyauktada	ကျောက်တံတားKyauktaga	ကျောက်တံခါးKyauktan	ကျောက်တန်းKyauktaw	ကျောက်တော်Kyaunggon	ကျောင်းကုန်းKyeemyindaing	ကြည့်မြင်တိုင်Kyethi	ကျေးသီးKyonpyaw	ကျုံပျော်Kyunhla	ကျွန်းလှKyunsu	ကျွန်းစုLabutta	လပွတ္တာLahe	လဟယ်Laihka	လဲချားLangkho	လင်းခေးLanmadaw	လမ်းမတော်Lashio	လားရှိုးLatha	လသာLaukkaing	လောက်ကိုင်Launglon	လောင်းလုံLawksawk	ရပ်စောက်Lay Shi	လေရှီးLemyethna	လေးမျက်နှာLetpadan	လက်ပံတန်းLewe	လယ်ဝေးLoikaw	လွိုင်ကော်Loilen	လွိုင်လင်Mabein	မဘိမ်းMachanbaw	မချမ်းဘောMadaya	မတ္တရာMagway	မကွေးMahaaungmyay	မဟာအောင်မြေMahlaing	မလှိုင်Mansi	မံစီManton	မန်တုံMatman	မက်မန်းMatupi	မတူပီMaubin	မအူပင်Maungdaw	မောင်တောMawkmai	မောက်မယ်Mawlaik	မော်လိုက်Mawlamyine	မော်လမြိုင်Mawlamyinegyun	မော်လမြိုင်ကျွန်းMayangone	မရမ်းကုန်းMeiktila	မိတ္ထီလာMese	မယ်စဲ့Minbu	မင်းဘူးMinbya	မင်းပြားMindat	မင်းတပ်Mindon	မင်းတုန်းMingaladon	မင်္ဂလာဒုံMingalartaungnyunt	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်Mingin	မင်းကင်းMinhla	မင်းလှMinhla	မင်းလှMogaung	မိုးကောင်းMogoke	မိုးကုတ်Mohnyin	မိုးညှင်းMomauk	မိုးမောက်Monghpyak	မိုင်းဖြတ်Monghsat	မိုင်းဆတ်Monghsu	မိုင်းရှူးMongkaing	မိုင်းကိုင်Mongkhet	မိုင်းခတ်Mongla	မိုင်းလားMongmao	မိုင်းမောMongmit	မိုးမိတ်Mongnai	မိုးနဲMongpan	မိုင်းပန်Mongping	မိုင်းပျဥ်းMongton	မိုင်းတုံMongyai	မိုင်းရယ်Mongyang	မိုင်းယန်းMongyawng	မိုင်းယောင်းMonyo	မိုးညိုMonywa	မုံရွာMrauk-U	မြောက်ဦးMudon	မုဒုံMunaung	မာန်အောင်Muse	မူဆယ်Myaing	မြိုင်Myanaung	မြန်အောင်Myaung	မြောင်Myaungmya	မြောင်းမြMyawaddy	မြဝတီMyebon	မြေပုံMyeik	မြိတ်Myingyan	မြင်းခြံMyinmu	မြင်းမူMyitkyina	မြစ်ကြီးနားMyittha	မြစ်သားMyothit	မြို့သစ်Namhkan	နမ့်ခမ်းNamhsan	နမ့်ဆန်Namtu	နမ္မတူNansang	နမ့်စန်Nanyun	နန်းယွန်းNarphan	နားဖန်းNatmauk	နတ်မောက်Natogyi	နွားထိုးကြီးNattalin	နတ်တလင်းNawnghkio	နောင်ချိုNawngmun	နောင်မွန်းNgape	ငဖဲNgapudaw	ငပုတောNgazun	ငါန်းဇွန်North Okkalapa	မြောက်ဥက္ကလာပNyaung-U	ညောင်ဦးNyaungdon	ညောင်တုန်းNyaunglebin	ညောင်လေးပင်Nyaungshwe	ညောင်ရွှေOke Ta Ra Thi Ri	ဥတ္တရသီရိOkpho	အုတ်ဖိုOktwin	အုတ်တွင်းPabedan	ပန်းဘဲတန်းPadaung	ပန်းတောင်းPakokku	ပခုက္ကူPalaw	ပုလောPale	ပုလဲPaletwa	ပလက်ဝPangsang	ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)Pangwaun	ပန်ဝိုင်Pantanaw	ပန်းတနော်Pathein	ပုသိမ်Patheingyi	ပုသိမ်ကြီးPauk	ပေါက်Paukkhaung	ပေါက်ခေါင်းPauktaw	ပေါက်တောPaung	ပေါင်Paungbyin	ဖောင်းပြင်Paungde	ပေါင်းတည်Pazundaung	ပုဇွန်တောင်Pekon	ဖယ်ခုံPhyu	ဖြူးPindaya	ပင်းတယPinlaung	ပင်လောင်းPinlebu	ပင်လည်ဘူးPoke Ba Thi Ri	ပုဗ္ဗသီရိPonnagyun	ပုဏ္ဏားကျွန်းPuta-O	ပူတာအိုPwintbyu	ပွင့်ဖြူPyapon	ဖျာပုံPyawbwe	ပျော်ဘွယ်Pyay	ပြည်Pyigyitagon	ပြည်ကြီးတံခွန်Pyinmana	ပျဉ်းမနားPyinoolwin	ပြင်ဦးလွင်Ramree	ရမ်းဗြဲRathedaung	ရသေ့တောင်Sagaing	စစ်ကိုင်းSalin	စလင်းSalingyi	ဆားလင်းကြီးSanchaung	စမ်းချောင်းSaw	ဆောSeikgyikanaungto	ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုSeikkan	ဆိပ်ကမ်းSeikphyu	ဆိပ်ဖြူShadaw	ရှားတောShwebo	ရွှေဘိုShwedaung	ရွှေတောင်Shwegu	ရွှေကူShwegyin	ရွှေကျင်Shwepyithar	ရွှေပြည်သာSidoktaya	စေတုတ္တရာSinbaungwe	ဆင်ပေါင်ဝဲSingu	စဥ့်ကူးSintgaing	စဉ့်ကိုင်Sittwe	စစ်တွေSouth Okkalapa	တောင်ဥက္ကလာပSumprabum	ဆွမ်ပရာဘွမ်Tabayin	ဒီပဲယင်းTachileik	တာချီလိတ်Tada-U	တံတားဦးTaikkyi	တိုက်ကြီးTamu	တမူးTamwe	တာမွေTanai	တနိုင်းTangyan	တန့်ယန်းTanintharyi	တနင်္သာရီTatkon	တပ်ကုန်းTaungdwingyi	တောင်တွင်းကြီးTaunggyi	တောင်ကြီးTaungoo	တောင်ငူTaungtha	တောင်သာTaze	တန့်ဆည်Tedim	တီးတိန်Thabaung	သာပေါင်းThabeikkyin	သပိတ်ကျင်းThaketa	သာကေတThanatpin	သနပ်ပင်Thanbyuzayat	သံဖြူဇရပ်Thandaunggyi	သံတောင်ကြီးThandwe	သံတွဲThanlyin	သန်လျင်Thantlang	ထန်တလန်Thaton	သထုံThayarwady	သာယာဝတီThayet	သရက်Thayetchaung	သရက်ချောင်းThazi	သာစည်Thegon	သဲကုန်းThingangyun	သင်္ဃန်းကျွန်းThongwa	သုံးခွTigyaing	ထီးချိုင့်Tilin	ထီးလင်းTonzang	တွန်းဇံToungup	တောင်ကုတ်Tsawlaw	ဆော့လော်Twantay	တွံတေးWaingmaw	ဝိုင်းမော်Wakema	ဝါးခယ်မWaw	ဝေါWetlet	ဝက်လက်Wundwin	ဝမ်းတွင်းWuntho	ဝန်းသိုYamethin	ရမည်းသင်းYankin	ရန်ကင်းYe	ရေးYe-U	ရေဦးYebyu	ရေဖြူYedashe	ရေတာရှည်Yegyi	ရေကြည်Yenangyaung	ရေနံချောင်းYesagyo	ရေစကြိုYinmarbin	ယင်းမာပင်Ywangan	ရွာငံZa Bu Thi Ri	ဇမ္ဗူသီရိZalun	ဇလွန်Zay Yar Thi Ri	ဇေယျာသီရိZigon	ဇီးကုန်း
(Family Member 8) Permanent Address အမြဲတမ်းနေသော နေရပ်လိပ်စာ
(Family Member 9) Full name အမည်အပြည့်အစုံ
(Family Member 9) Gender ကျား/မ ရွေးပေးပါ
(Family Member 9) NRC number or Passport နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/နိုင်ငံကူးမှတ်ပုံတင်အမှတ်ကိုဖော်ပြပေးပ
(Family Member 9) Father's Name ဖခင်နာမည်အပြည့်အစုံကိုရေးပေးပါ
(Family Member 9) Birth Date မွေးနေ့၊ မွေးလ၊ မွေးနှစ် ကိုဖော်ပြပေးပါ။ DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / MM123456789101112 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
(Family Member 9) Phone Number ဖုန်းနံပါတ်
(Family Member 9) State / Division ပြည်နယ်/ တိုင်း Ayeyarwady	ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးBago (East)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)Bago (West)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)Chin	ချင်းပြည်နယ်Kachin	ကချင်ပြည်နယ်Kayah	ကယားပြည်နယ်Kayin	ကရင်ပြည်နယ်Magway	မကွေးတိုင်းဒေသကြီးMandalay	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးMon	မွန်ပြည်နယ်Nay Pyi Taw	နေပြည်တော်Rakhine	ရခိုင်ပြည်နယ်Sagaing	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးShan (East)	ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့)Shan (North)	ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်)Shan (South)	ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)Tanintharyi	တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးYangon	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(Family Member 9) Township မြို့နယ် Ahlone	အလုံAmarapura	အမရပူရAnn	အမ်းAunglan	အောင်လံAungmyaythazan	အောင်မြေသာစံAyadaw	အရာတော်Bago	ပဲခူးBahan	ဗဟန်းBanmauk	ဗန်းမောက်Bawlakhe	ဘောလခဲBhamo	ဗန်းမော်Bilin	ဘီးလင်းBogale	ဘိုကလေးBokpyin	ဘုတ်ပြင်းBotahtaung	ဗိုလ်တထောင်Budalin	ဘုတလင်Buthidaung	ဘူးသီးတောင်Chanayethazan	ချမ်းအေးသာစံChanmyathazi	ချမ်းမြသာစည်Chauk	ချောက်Chaung-U	ချောင်းဦးChaungzon	ချောင်းဆုံChipwi	ချီဖွေCocokyun	ကိုကိုးကျွန်းDagon	ဒဂုံDagon Myothit (East)	ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)Dagon Myothit (North)	ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)Dagon Myothit (Seikkan)	ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)Dagon Myothit (South)	ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)Daik-U	ဒိုက်ဦးDala	ဒလDanubyu	ဓနုဖြူDawbon	ဒေါပုံDawei	ထားဝယ်Dedaye	ဒေးဒရဲDemoso	ဒီမောဆိုDet Khi Na Thi Ri	ဒက္ခိဏသီရိEinme	အိမ်မဲFalam	ဖလမ်းGangaw	ဂန့်ဂေါGwa	ဂွGyobingauk	ကြို့ပင်ကောက်Hakha	ဟားခါးHinthada	ဟင်္သာတHkamti	ခန္တီးHlaing	လှိုင်Hlaingbwe	လှိုင်းဘွဲ့Hlaingtharya	လှိုင်သာယာHlegu	လှည်းကူးHmawbi	မှော်ဘီHomalin	ဟုမ္မလင်းHopang	ဟိုပန်Hopong	ဟိုပုန်းHpa-An	ဘားအံHpakant	ဖားကန့်Hpapun	ဖာပွန်Hpasawng	ဖားဆောင်းHpruso	ဖရူဆိုHseni	သိန္နီHsihseng	ဆီဆိုင်Hsipaw	သီပေါHtantabin	ထန်းတပင်Htantabin	ထန်းတပင်Indaw	အင်းတော်Ingapu	အင်္ဂပူInjangyang	အင်ဂျန်းယန်Insein	အင်းစိန်Kalaw	ကလောKale	ကလေးKalewa	ကလေးဝKamaryut	ကမာရွတ်Kamma	ကံမKanbalu	ကန့်ဘလူKangyidaunt	ကန်ကြီးထောင့်Kani	ကနီKanpetlet	ကန်ပက်လက်Katha	ကသာKawa	ကဝKawhmu	ကော့မှူးKawkareik	ကော့ကရိတ်Kawlin	ကောလင်းKawthoung	ကော့သောင်းKayan	ခရမ်းKengtung	ကျိုင်းတုံKhaunglanhpu	ခေါင်လန်ဖူးKhin-U	ခင်ဦးKonkyan	ကုန်းကြမ်းKungyangon	ကွမ်းခြံကုန်းKunhing	ကွန်ဟိန်းKunlong	ကွမ်းလုံKutkai	ကွတ်ခိုင်Kyaiklat	ကျိုက်လတ်Kyaikmaraw	ကျိုက်မရောKyaikto	ကျိုက်ထိုKyainseikgyi	ကြာအင်းဆိပ်ကြီးKyangin	ကြံခင်းKyaukkyi	ကျောက်ကြီးKyaukme	ကျောက်မဲKyaukpadaung	ကျောက်ပန်းတောင်းKyaukpyu	ကျောက်ဖြူKyaukse	ကျောက်ဆည်Kyauktada	ကျောက်တံတားKyauktaga	ကျောက်တံခါးKyauktan	ကျောက်တန်းKyauktaw	ကျောက်တော်Kyaunggon	ကျောင်းကုန်းKyeemyindaing	ကြည့်မြင်တိုင်Kyethi	ကျေးသီးKyonpyaw	ကျုံပျော်Kyunhla	ကျွန်းလှKyunsu	ကျွန်းစုLabutta	လပွတ္တာLahe	လဟယ်Laihka	လဲချားLangkho	လင်းခေးLanmadaw	လမ်းမတော်Lashio	လားရှိုးLatha	လသာLaukkaing	လောက်ကိုင်Launglon	လောင်းလုံLawksawk	ရပ်စောက်Lay Shi	လေရှီးLemyethna	လေးမျက်နှာLetpadan	လက်ပံတန်းLewe	လယ်ဝေးLoikaw	လွိုင်ကော်Loilen	လွိုင်လင်Mabein	မဘိမ်းMachanbaw	မချမ်းဘောMadaya	မတ္တရာMagway	မကွေးMahaaungmyay	မဟာအောင်မြေMahlaing	မလှိုင်Mansi	မံစီManton	မန်တုံMatman	မက်မန်းMatupi	မတူပီMaubin	မအူပင်Maungdaw	မောင်တောMawkmai	မောက်မယ်Mawlaik	မော်လိုက်Mawlamyine	မော်လမြိုင်Mawlamyinegyun	မော်လမြိုင်ကျွန်းMayangone	မရမ်းကုန်းMeiktila	မိတ္ထီလာMese	မယ်စဲ့Minbu	မင်းဘူးMinbya	မင်းပြားMindat	မင်းတပ်Mindon	မင်းတုန်းMingaladon	မင်္ဂလာဒုံMingalartaungnyunt	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်Mingin	မင်းကင်းMinhla	မင်းလှMinhla	မင်းလှMogaung	မိုးကောင်းMogoke	မိုးကုတ်Mohnyin	မိုးညှင်းMomauk	မိုးမောက်Monghpyak	မိုင်းဖြတ်Monghsat	မိုင်းဆတ်Monghsu	မိုင်းရှူးMongkaing	မိုင်းကိုင်Mongkhet	မိုင်းခတ်Mongla	မိုင်းလားMongmao	မိုင်းမောMongmit	မိုးမိတ်Mongnai	မိုးနဲMongpan	မိုင်းပန်Mongping	မိုင်းပျဥ်းMongton	မိုင်းတုံMongyai	မိုင်းရယ်Mongyang	မိုင်းယန်းMongyawng	မိုင်းယောင်းMonyo	မိုးညိုMonywa	မုံရွာMrauk-U	မြောက်ဦးMudon	မုဒုံMunaung	မာန်အောင်Muse	မူဆယ်Myaing	မြိုင်Myanaung	မြန်အောင်Myaung	မြောင်Myaungmya	မြောင်းမြMyawaddy	မြဝတီMyebon	မြေပုံMyeik	မြိတ်Myingyan	မြင်းခြံMyinmu	မြင်းမူMyitkyina	မြစ်ကြီးနားMyittha	မြစ်သားMyothit	မြို့သစ်Namhkan	နမ့်ခမ်းNamhsan	နမ့်ဆန်Namtu	နမ္မတူNansang	နမ့်စန်Nanyun	နန်းယွန်းNarphan	နားဖန်းNatmauk	နတ်မောက်Natogyi	နွားထိုးကြီးNattalin	နတ်တလင်းNawnghkio	နောင်ချိုNawngmun	နောင်မွန်းNgape	ငဖဲNgapudaw	ငပုတောNgazun	ငါန်းဇွန်North Okkalapa	မြောက်ဥက္ကလာပNyaung-U	ညောင်ဦးNyaungdon	ညောင်တုန်းNyaunglebin	ညောင်လေးပင်Nyaungshwe	ညောင်ရွှေOke Ta Ra Thi Ri	ဥတ္တရသီရိOkpho	အုတ်ဖိုOktwin	အုတ်တွင်းPabedan	ပန်းဘဲတန်းPadaung	ပန်းတောင်းPakokku	ပခုက္ကူPalaw	ပုလောPale	ပုလဲPaletwa	ပလက်ဝPangsang	ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)Pangwaun	ပန်ဝိုင်Pantanaw	ပန်းတနော်Pathein	ပုသိမ်Patheingyi	ပုသိမ်ကြီးPauk	ပေါက်Paukkhaung	ပေါက်ခေါင်းPauktaw	ပေါက်တောPaung	ပေါင်Paungbyin	ဖောင်းပြင်Paungde	ပေါင်းတည်Pazundaung	ပုဇွန်တောင်Pekon	ဖယ်ခုံPhyu	ဖြူးPindaya	ပင်းတယPinlaung	ပင်လောင်းPinlebu	ပင်လည်ဘူးPoke Ba Thi Ri	ပုဗ္ဗသီရိPonnagyun	ပုဏ္ဏားကျွန်းPuta-O	ပူတာအိုPwintbyu	ပွင့်ဖြူPyapon	ဖျာပုံPyawbwe	ပျော်ဘွယ်Pyay	ပြည်Pyigyitagon	ပြည်ကြီးတံခွန်Pyinmana	ပျဉ်းမနားPyinoolwin	ပြင်ဦးလွင်Ramree	ရမ်းဗြဲRathedaung	ရသေ့တောင်Sagaing	စစ်ကိုင်းSalin	စလင်းSalingyi	ဆားလင်းကြီးSanchaung	စမ်းချောင်းSaw	ဆောSeikgyikanaungto	ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုSeikkan	ဆိပ်ကမ်းSeikphyu	ဆိပ်ဖြူShadaw	ရှားတောShwebo	ရွှေဘိုShwedaung	ရွှေတောင်Shwegu	ရွှေကူShwegyin	ရွှေကျင်Shwepyithar	ရွှေပြည်သာSidoktaya	စေတုတ္တရာSinbaungwe	ဆင်ပေါင်ဝဲSingu	စဥ့်ကူးSintgaing	စဉ့်ကိုင်Sittwe	စစ်တွေSouth Okkalapa	တောင်ဥက္ကလာပSumprabum	ဆွမ်ပရာဘွမ်Tabayin	ဒီပဲယင်းTachileik	တာချီလိတ်Tada-U	တံတားဦးTaikkyi	တိုက်ကြီးTamu	တမူးTamwe	တာမွေTanai	တနိုင်းTangyan	တန့်ယန်းTanintharyi	တနင်္သာရီTatkon	တပ်ကုန်းTaungdwingyi	တောင်တွင်းကြီးTaunggyi	တောင်ကြီးTaungoo	တောင်ငူTaungtha	တောင်သာTaze	တန့်ဆည်Tedim	တီးတိန်Thabaung	သာပေါင်းThabeikkyin	သပိတ်ကျင်းThaketa	သာကေတThanatpin	သနပ်ပင်Thanbyuzayat	သံဖြူဇရပ်Thandaunggyi	သံတောင်ကြီးThandwe	သံတွဲThanlyin	သန်လျင်Thantlang	ထန်တလန်Thaton	သထုံThayarwady	သာယာဝတီThayet	သရက်Thayetchaung	သရက်ချောင်းThazi	သာစည်Thegon	သဲကုန်းThingangyun	သင်္ဃန်းကျွန်းThongwa	သုံးခွTigyaing	ထီးချိုင့်Tilin	ထီးလင်းTonzang	တွန်းဇံToungup	တောင်ကုတ်Tsawlaw	ဆော့လော်Twantay	တွံတေးWaingmaw	ဝိုင်းမော်Wakema	ဝါးခယ်မWaw	ဝေါWetlet	ဝက်လက်Wundwin	ဝမ်းတွင်းWuntho	ဝန်းသိုYamethin	ရမည်းသင်းYankin	ရန်ကင်းYe	ရေးYe-U	ရေဦးYebyu	ရေဖြူYedashe	ရေတာရှည်Yegyi	ရေကြည်Yenangyaung	ရေနံချောင်းYesagyo	ရေစကြိုYinmarbin	ယင်းမာပင်Ywangan	ရွာငံZa Bu Thi Ri	ဇမ္ဗူသီရိZalun	ဇလွန်Zay Yar Thi Ri	ဇေယျာသီရိZigon	ဇီးကုန်း
(Family Member 9) Permanent Address အမြဲတမ်းနေသော နေရပ်လိပ်စာ
(Family Member 10) Full name အမည်အပြည့်အစုံ
(Family Member 10) Gender ကျား/မ ရွေးပေးပါ
(Family Member 10) NRC number or Passport နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/နိုင်ငံကူးမှတ်ပုံတင်အမှတ်ကိုဖော်ပြပေးပ
(Family Member 10) Father's Name ဖခင်နာမည်အပြည့်အစုံကိုရေးပေးပါ
(Family Member 10) Birth Date မွေးနေ့၊ မွေးလ၊ မွေးနှစ် ကိုဖော်ပြပေးပါ။ DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / MM123456789101112 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
(Family Member 10) Phone Number ဖုန်းနံပါတ်
(Family Member 10) State / Division ပြည်နယ်/ တိုင်း Ayeyarwady	ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးBago (East)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)Bago (West)	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)Chin	ချင်းပြည်နယ်Kachin	ကချင်ပြည်နယ်Kayah	ကယားပြည်နယ်Kayin	ကရင်ပြည်နယ်Magway	မကွေးတိုင်းဒေသကြီးMandalay	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးMon	မွန်ပြည်နယ်Nay Pyi Taw	နေပြည်တော်Rakhine	ရခိုင်ပြည်နယ်Sagaing	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးShan (East)	ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့)Shan (North)	ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်)Shan (South)	ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်)Tanintharyi	တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးYangon	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(Family Member 10) Township မြို့နယ် Ahlone	အလုံAmarapura	အမရပူရAnn	အမ်းAunglan	အောင်လံAungmyaythazan	အောင်မြေသာစံAyadaw	အရာတော်Bago	ပဲခူးBahan	ဗဟန်းBanmauk	ဗန်းမောက်Bawlakhe	ဘောလခဲBhamo	ဗန်းမော်Bilin	ဘီးလင်းBogale	ဘိုကလေးBokpyin	ဘုတ်ပြင်းBotahtaung	ဗိုလ်တထောင်Budalin	ဘုတလင်Buthidaung	ဘူးသီးတောင်Chanayethazan	ချမ်းအေးသာစံChanmyathazi	ချမ်းမြသာစည်Chauk	ချောက်Chaung-U	ချောင်းဦးChaungzon	ချောင်းဆုံChipwi	ချီဖွေCocokyun	ကိုကိုးကျွန်းDagon	ဒဂုံDagon Myothit (East)	ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)Dagon Myothit (North)	ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)Dagon Myothit (Seikkan)	ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)Dagon Myothit (South)	ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)Daik-U	ဒိုက်ဦးDala	ဒလDanubyu	ဓနုဖြူDawbon	ဒေါပုံDawei	ထားဝယ်Dedaye	ဒေးဒရဲDemoso	ဒီမောဆိုDet Khi Na Thi Ri	ဒက္ခိဏသီရိEinme	အိမ်မဲFalam	ဖလမ်းGangaw	ဂန့်ဂေါGwa	ဂွGyobingauk	ကြို့ပင်ကောက်Hakha	ဟားခါးHinthada	ဟင်္သာတHkamti	ခန္တီးHlaing	လှိုင်Hlaingbwe	လှိုင်းဘွဲ့Hlaingtharya	လှိုင်သာယာHlegu	လှည်းကူးHmawbi	မှော်ဘီHomalin	ဟုမ္မလင်းHopang	ဟိုပန်Hopong	ဟိုပုန်းHpa-An	ဘားအံHpakant	ဖားကန့်Hpapun	ဖာပွန်Hpasawng	ဖားဆောင်းHpruso	ဖရူဆိုHseni	သိန္နီHsihseng	ဆီဆိုင်Hsipaw	သီပေါHtantabin	ထန်းတပင်Htantabin	ထန်းတပင်Indaw	အင်းတော်Ingapu	အင်္ဂပူInjangyang	အင်ဂျန်းယန်Insein	အင်းစိန်Kalaw	ကလောKale	ကလေးKalewa	ကလေးဝKamaryut	ကမာရွတ်Kamma	ကံမKanbalu	ကန့်ဘလူKangyidaunt	ကန်ကြီးထောင့်Kani	ကနီKanpetlet	ကန်ပက်လက်Katha	ကသာKawa	ကဝKawhmu	ကော့မှူးKawkareik	ကော့ကရိတ်Kawlin	ကောလင်းKawthoung	ကော့သောင်းKayan	ခရမ်းKengtung	ကျိုင်းတုံKhaunglanhpu	ခေါင်လန်ဖူးKhin-U	ခင်ဦးKonkyan	ကုန်းကြမ်းKungyangon	ကွမ်းခြံကုန်းKunhing	ကွန်ဟိန်းKunlong	ကွမ်းလုံKutkai	ကွတ်ခိုင်Kyaiklat	ကျိုက်လတ်Kyaikmaraw	ကျိုက်မရောKyaikto	ကျိုက်ထိုKyainseikgyi	ကြာအင်းဆိပ်ကြီးKyangin	ကြံခင်းKyaukkyi	ကျောက်ကြီးKyaukme	ကျောက်မဲKyaukpadaung	ကျောက်ပန်းတောင်းKyaukpyu	ကျောက်ဖြူKyaukse	ကျောက်ဆည်Kyauktada	ကျောက်တံတားKyauktaga	ကျောက်တံခါးKyauktan	ကျောက်တန်းKyauktaw	ကျောက်တော်Kyaunggon	ကျောင်းကုန်းKyeemyindaing	ကြည့်မြင်တိုင်Kyethi	ကျေးသီးKyonpyaw	ကျုံပျော်Kyunhla	ကျွန်းလှKyunsu	ကျွန်းစုLabutta	လပွတ္တာLahe	လဟယ်Laihka	လဲချားLangkho	လင်းခေးLanmadaw	လမ်းမတော်Lashio	လားရှိုးLatha	လသာLaukkaing	လောက်ကိုင်Launglon	လောင်းလုံLawksawk	ရပ်စောက်Lay Shi	လေရှီးLemyethna	လေးမျက်နှာLetpadan	လက်ပံတန်းLewe	လယ်ဝေးLoikaw	လွိုင်ကော်Loilen	လွိုင်လင်Mabein	မဘိမ်းMachanbaw	မချမ်းဘောMadaya	မတ္တရာMagway	မကွေးMahaaungmyay	မဟာအောင်မြေMahlaing	မလှိုင်Mansi	မံစီManton	မန်တုံMatman	မက်မန်းMatupi	မတူပီMaubin	မအူပင်Maungdaw	မောင်တောMawkmai	မောက်မယ်Mawlaik	မော်လိုက်Mawlamyine	မော်လမြိုင်Mawlamyinegyun	မော်လမြိုင်ကျွန်းMayangone	မရမ်းကုန်းMeiktila	မိတ္ထီလာMese	မယ်စဲ့Minbu	မင်းဘူးMinbya	မင်းပြားMindat	မင်းတပ်Mindon	မင်းတုန်းMingaladon	မင်္ဂလာဒုံMingalartaungnyunt	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်Mingin	မင်းကင်းMinhla	မင်းလှMinhla	မင်းလှMogaung	မိုးကောင်းMogoke	မိုးကုတ်Mohnyin	မိုးညှင်းMomauk	မိုးမောက်Monghpyak	မိုင်းဖြတ်Monghsat	မိုင်းဆတ်Monghsu	မိုင်းရှူးMongkaing	မိုင်းကိုင်Mongkhet	မိုင်းခတ်Mongla	မိုင်းလားMongmao	မိုင်းမောMongmit	မိုးမိတ်Mongnai	မိုးနဲMongpan	မိုင်းပန်Mongping	မိုင်းပျဥ်းMongton	မိုင်းတုံMongyai	မိုင်းရယ်Mongyang	မိုင်းယန်းMongyawng	မိုင်းယောင်းMonyo	မိုးညိုMonywa	မုံရွာMrauk-U	မြောက်ဦးMudon	မုဒုံMunaung	မာန်အောင်Muse	မူဆယ်Myaing	မြိုင်Myanaung	မြန်အောင်Myaung	မြောင်Myaungmya	မြောင်းမြMyawaddy	မြဝတီMyebon	မြေပုံMyeik	မြိတ်Myingyan	မြင်းခြံMyinmu	မြင်းမူMyitkyina	မြစ်ကြီးနားMyittha	မြစ်သားMyothit	မြို့သစ်Namhkan	နမ့်ခမ်းNamhsan	နမ့်ဆန်Namtu	နမ္မတူNansang	နမ့်စန်Nanyun	နန်းယွန်းNarphan	နားဖန်းNatmauk	နတ်မောက်Natogyi	နွားထိုးကြီးNattalin	နတ်တလင်းNawnghkio	နောင်ချိုNawngmun	နောင်မွန်းNgape	ငဖဲNgapudaw	ငပုတောNgazun	ငါန်းဇွန်North Okkalapa	မြောက်ဥက္ကလာပNyaung-U	ညောင်ဦးNyaungdon	ညောင်တုန်းNyaunglebin	ညောင်လေးပင်Nyaungshwe	ညောင်ရွှေOke Ta Ra Thi Ri	ဥတ္တရသီရိOkpho	အုတ်ဖိုOktwin	အုတ်တွင်းPabedan	ပန်းဘဲတန်းPadaung	ပန်းတောင်းPakokku	ပခုက္ကူPalaw	ပုလောPale	ပုလဲPaletwa	ပလက်ဝPangsang	ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)Pangwaun	ပန်ဝိုင်Pantanaw	ပန်းတနော်Pathein	ပုသိမ်Patheingyi	ပုသိမ်ကြီးPauk	ပေါက်Paukkhaung	ပေါက်ခေါင်းPauktaw	ပေါက်တောPaung	ပေါင်Paungbyin	ဖောင်းပြင်Paungde	ပေါင်းတည်Pazundaung	ပုဇွန်တောင်Pekon	ဖယ်ခုံPhyu	ဖြူးPindaya	ပင်းတယPinlaung	ပင်လောင်းPinlebu	ပင်လည်ဘူးPoke Ba Thi Ri	ပုဗ္ဗသီရိPonnagyun	ပုဏ္ဏားကျွန်းPuta-O	ပူတာအိုPwintbyu	ပွင့်ဖြူPyapon	ဖျာပုံPyawbwe	ပျော်ဘွယ်Pyay	ပြည်Pyigyitagon	ပြည်ကြီးတံခွန်Pyinmana	ပျဉ်းမနားPyinoolwin	ပြင်ဦးလွင်Ramree	ရမ်းဗြဲRathedaung	ရသေ့တောင်Sagaing	စစ်ကိုင်းSalin	စလင်းSalingyi	ဆားလင်းကြီးSanchaung	စမ်းချောင်းSaw	ဆောSeikgyikanaungto	ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုSeikkan	ဆိပ်ကမ်းSeikphyu	ဆိပ်ဖြူShadaw	ရှားတောShwebo	ရွှေဘိုShwedaung	ရွှေတောင်Shwegu	ရွှေကူShwegyin	ရွှေကျင်Shwepyithar	ရွှေပြည်သာSidoktaya	စေတုတ္တရာSinbaungwe	ဆင်ပေါင်ဝဲSingu	စဥ့်ကူးSintgaing	စဉ့်ကိုင်Sittwe	စစ်တွေSouth Okkalapa	တောင်ဥက္ကလာပSumprabum	ဆွမ်ပရာဘွမ်Tabayin	ဒီပဲယင်းTachileik	တာချီလိတ်Tada-U	တံတားဦးTaikkyi	တိုက်ကြီးTamu	တမူးTamwe	တာမွေTanai	တနိုင်းTangyan	တန့်ယန်းTanintharyi	တနင်္သာရီTatkon	တပ်ကုန်းTaungdwingyi	တောင်တွင်းကြီးTaunggyi	တောင်ကြီးTaungoo	တောင်ငူTaungtha	တောင်သာTaze	တန့်ဆည်Tedim	တီးတိန်Thabaung	သာပေါင်းThabeikkyin	သပိတ်ကျင်းThaketa	သာကေတThanatpin	သနပ်ပင်Thanbyuzayat	သံဖြူဇရပ်Thandaunggyi	သံတောင်ကြီးThandwe	သံတွဲThanlyin	သန်လျင်Thantlang	ထန်တလန်Thaton	သထုံThayarwady	သာယာဝတီThayet	သရက်Thayetchaung	သရက်ချောင်းThazi	သာစည်Thegon	သဲကုန်းThingangyun	သင်္ဃန်းကျွန်းThongwa	သုံးခွTigyaing	ထီးချိုင့်Tilin	ထီးလင်းTonzang	တွန်းဇံToungup	တောင်ကုတ်Tsawlaw	ဆော့လော်Twantay	တွံတေးWaingmaw	ဝိုင်းမော်Wakema	ဝါးခယ်မWaw	ဝေါWetlet	ဝက်လက်Wundwin	ဝမ်းတွင်းWuntho	ဝန်းသိုYamethin	ရမည်းသင်းYankin	ရန်ကင်းYe	ရေးYe-U	ရေဦးYebyu	ရေဖြူYedashe	ရေတာရှည်Yegyi	ရေကြည်Yenangyaung	ရေနံချောင်းYesagyo	ရေစကြိုYinmarbin	ယင်းမာပင်Ywangan	ရွာငံZa Bu Thi Ri	ဇမ္ဗူသီရိZalun	ဇလွန်Zay Yar Thi Ri	ဇေယျာသီရိZigon	ဇီးကုန်း
(Family Member 10) Permanent Address အမြဲတမ်းနေသော နေရပ်လိပ်စာ
ZADA’s mission is to ensure everyone has equal opportunities to benefit from new digital services and offerings inasafe way without risk for fraud or privacy intrusion.
2nd floor, 10/H Mahanbandoola Road
ZADA SOLUTIONS PTE. LTD. /
© 2021 ZADA Solutions PTE. Ltd. All Rights Reserved.